အဘိုးအဘွားများအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ၁၀၁ (၂၀၂၁) - လက်ဆောင်များ
အပြာရောင်ဒိန်ခဲသုပ်နှင့်အတူဤ Buffalo ကြက်သားကိုစမ်းကြည့်ပါ
သင်၏နေ့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Diy မင်္ဂလာဆောင်စင်တာ
ဆား Caramel Brownie
အဘိုးအဘွားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အထူးအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာကိုအမှန်တကယ်စဉ်းစားပြီးနှလုံးသားနှင့်လက်ဆောင်များဖြင့်ဖော်ပြလိုသည်။ အဘိုးအဘွားများအတွက်ဤခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များသည်ရယ်စရာ၊ ပျော်စရာ၊ ကိုယ်ပိုင်နှင့်လက်တွေ့ကျသောအရာများအတွက်စိတ်ကူး ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းအင်္ဂါရပ်များ လူကြီးများအတွက်လက်ဆောင်စိတ်ကူးများ အသက်ငယ်တဲ့အဘိုးအဘွားတွေရော၊ ဒါကြောင့်မင်းမှန်တာတစ်ခုခုတွေ့မှာသေချာတယ်။
စီပါ စျေးနှုန်း : $- ဒေါ်လာ ၁၀၁စာရင်းဝင်ပစ္စည်းများ
စျေးနှုန်း: ၄၅.၀၁ ဒေါ်လာ
ယခု Amazon တွင်စျေး ၀ ယ်ပါ Amazon မှ
ဤလှပသောအဖွားနှင့်မြေးရုပ်တုသည်မည်သည့်အဖွားအတွက်မဆိုကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ် သူမ၏မြေးငယ်လေးကိုကိုင်ထားသည့်အဘွားတစ် ဦး ကိုပြပြီးကလေးကသူမအားလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ချစ်ခင်စွာဆန့်ထုတ်သည်။ ပန်းပုသည်ချစ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။အနုပညာရှင် Susan Lordi သည် Kansas City, MO ရှိသူမ၏စတူဒီယိုမှ Willow Tree အပိုင်းအစတစ်ခုစီ၏မူရင်းကိုထွင်းထုသည်။ ပန်းပုကိုသူမ၏မူလလက်ရာမှသွန်း လုပ်၍ လက်ဖြင့်ခြယ်သသည်။၎င်းကိုလက်ဆောင်ပေးရန်အဆင်သင့်လက်ဆောင်ဗူးတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
မင်းအဖိုးကအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ပန်းပုရုပ်ကိုသေချာလိုချင်ရင် Willow သစ်ပင်အဖိုးနှင့်ကလေးပန်းပု အဘိုးအို၏လက်ကိုအနည်းငယ်ဆုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်တကယ်ကိုထိမိသည်။ သူကချစ်ဖို့သေချာတယ်။
စျေးနှုန်း: ၁၀.၄၉ ဒေါ်လာ
ဒါကငါးကြိုက်တဲ့အဘိုးအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်ဆောင်ဘဲ။ လက်ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောငါးမျှားသည် မင်းကိုချစ်တယ်အဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထွင်းထားတယ်။ ၎င်းကိုသံမဏိနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ငါးမျှားချိတ်အတွက်ဆုံလည်ကိုတွဲချိတ်ပြီးငါးကိုရေ၌ပစ်ချရန်ကွင်းငယ်တစ်ခုရှိသည် ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော stocking stuffer တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဘိုးအိုသည်ငါးကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ချိုမြိန်သောသတိပေးချက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သူချစ်ဖို့သေချာသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းငါးမျှားတာကိုကြိုက်တဲ့အဘိုးကိုတကယ်အံ့သြစေချင်ရင်သူ့ကိုငါးမြှားအစုံယူလာပြီးအဲဒါကိုရောပြီးခိုးကြည့်ပါ။ ငါတို့အကြံပြုပါတယ် Mepps Trouter Kit
စျေးနှုန်း: ၁၅.၈၄ ဒေါ်လာ
အဘွားသည်အမှတ်တရများနှင့်အထူးအချိန်များကိုချရေးနိုင်ပြီးအနာဂတ်၌သူမ၏မြေးအားဖတ်ရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အခြားအရာများကိုရေးသားနိုင်သည် ဤအဖွားဂျာနယ် ၎င်းသည်နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်စစ်မှန်သောမိသားစုအမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဂျာနယ်တွင်သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်နှင့်သူမ၏မြေးများအတွက်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များကိုပြောပြရန်နေရာရှိသည်။
စာမျက်နှာတိုင်းတွင်သူမ၏အရေးအသားနှင့်အမှတ်တရများကိုကလေးဘဝမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအတွေ့အကြုံများအားထိတွေ့ခြင်းမှသည်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုဝေမျှခြင်း၊ ဘဝသင်ခန်းစာများနှင့်မိသားစုပုံပြင်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းတို့မှလှုံ့ဆော်ရန်အချက်ပေးသည်။ စာအုပ်ဖြည့်သောအခါသူမသည်သူမ၏မြေးများအား၎င်းအားဘွဲ့နှင်းသဘင်သို့မဟုတ်သူတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ကဲ့သို့အထူးအခါသမယတွင်၎င်းတို့အားပေးအပ်ရန်သိမ်းထားနိုင်သည်။ အတူလိုက်ပါခဲ့လျှင်ထိုအချိန်များတွင် ပို၍ ပင်ထူးခြားလိမ့်မည် အဖိုး၏ဂျာနယ်
စျေးနှုန်း: ၁၄.၉၉ ဒေါ်လာ
အဘိုးအိုသည်နိုင်ငံရေးအရူးတစ်ယောက်လား။ သူ့ကိုသမ္မတမတ်ခွက်အတွက်ဒီအဘိုးကိုယူလိုက်ပါ၊ သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်အဘိုးအဘွားများသည်အဘိုးအားမည်သည့်အခန်းကဏ္တွင်မဆိုမဲပေးနိုင်သည်။ အဖြူရောင်ကြွေခွက် အနီရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်အပြာရောင်ဒီဇိုင်းဖြင့် ၁၁ အောင်စရှိသည်။ သမ္မတအတွက်အဘိုးအို၏အောက်၌၎င်းသည်ရိုးသား။ ကြိုးစားမှု၊ ပျော်စရာဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်ခဲဓာတ်မပါသော၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံပြီး၎င်းသည်နေ့ကိုစတင်ရန်အဘိုး၏အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာရန်အလားအလာမြင့်မားသည်။
အဘိုးအိုကမင်းအဖေအိမ်မှာအဖေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သွားရင်သူကချစ်မှာသေချာတယ် ဒီအဖေဖန်ခွက် သူ့ကိုလူသား၊ ဒဏ္mythာရီ၊ ဒဏ္legendာရီဟုကြေငြာသည်။ ပိုကောင်းတာပေါ့၊ မင်းရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေမျှပါစေ။ သူ့ကိုရယူပါ Papa tee အင်္ကျီ တူညီသောစိတ်သဘောထားကိုမျှဝေသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၉၆ ဒေါ်လာ
Burts Bees Hand Repair Gift Set ဖြစ်သည်
အဘွားဖြစ်စေ၊ အဘိုးအတွက်ဖြစ်စေအလွန်ကောင်းမွန်သောလက်ပြုပြင်ခရင်မ်ကိုသင့်အဖိုးအဖွားများအားနှစ်သိမ့်ပေးပါ။ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီးဘိုးဘွားတွေလုပ်သမျှအခြားအရာတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အနည်းငယ်ဇိမ်ကျတဲ့အသားအရေကိုနှစ်သက်မှုကအမြဲကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါလေးကသဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ hand cream set လေးပါ ၎င်းသည်မွှေးပျံ့သောနံ့သာဆီ (ဗီတာမင်အီး)၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်ရုက္ခဗေဒအဆီတို့ဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒီ set မှာ almond milk hand cream, thicker shea butter hand cream,alemon butter cuticle cream, andacotton gloves ။ လက်လိမ်းခရင်များသည်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေကိုပြုပြင်ပေးပြီးဆောင်းရာသီတွင်အထူးအသုံးဝင်သည်။ cuticle cream သည် hangnails နှင့်ကြမ်းတမ်းသော cuticles များကိုချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းတို့သည်အမြင့်ဆုံးထိခိုက်မှုအတွက်တစ်ညလုံးစိမ်ထားရန်လက်အိတ်များပေါ်တွင်လိမ်းနိုင်သည်။ ဒီ set ကိုလက်ဆောင်ပေးနိုင်သော organza ကျောပိုးအိတ်တွင်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော stocking stuffer တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအားပေးသောအဖိုးအဖွားများအတွက်လက်ဆောင်များရယူလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် Burt's Bees Classics အစုံ အဘိုးအတွက်
စျေးနှုန်း: ၁၄.၄၉ ဒေါ်လာ
အဘွားကိုသူမမြေးများကကလေးထိန်းသောအခါဖတ်နိုင်သောလက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုယူပါ။ ဒီမှာအဖွားလာ အဘွားနှင့်သူမ၏မြေးများနှစ် ဦး စလုံးပျော်ရွင်စရာကောင်းသောစာအုပ်ပုံဖြစ်သည်။ သူမနှင့်ကလေးများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူမ၏အကြိုက်ဆုံးလူအချို့ကိုကြည့်ရန်ရထား၊ ကား၊ စက်ဘီးနှင့်စကိတ်စီးခြင်းဖြင့်ကန်ထုတ်ခံရလိမ့်မည်။ သရုပ်ဖော်ပုံတွေကအံ့မခန်းပါဘဲ။
မြေးမလေးများအားရယ်ရယ်မောမောဖြစ်စေရန်သူမကိုပျော်စရာဖတ်စရာများစုစည်းပေးလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအကြံပြုလိုပါသည် အဖွားကိုဘယ်လိုထိန်းကျောင်းမလဲ Mercer Mayer ၏ဂန္ထဝင်နှင့်အတူ အဘွားနှင့်ကျွန်ုပ်သာဖြစ်သည် မရ။
စျေးနှုန်း: ၁၂၅.၀၀ ကျပ်
ရေနှင့်အနံ့ခံနိုင်ရည်ရှိသော Travel Hoodie
မင်းအဘိုးကိုဖိတ်တာငါတို့မပြောဘူး၊ သူကအနံ့ဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမဆိုလိုပဲ၊ သူကမိုးရွာတာကိုကြုံရတာဘဲ၊ ဒါမှမဟုတ်သူနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်တဲ့ဆေးလိပ်သောက်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ၏ဂုဏ် ဤသန့်ရှင်းသော cotton hoodie ၎င်းသည် Filium activated ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သဘာဝအတိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အနံ့ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (အဘိုးအဘွားများတကယ်ဖိတ်လျှင်) အစွန်းအထင်းများကိုပင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဤစမတ်အသားဖြူအင်္ကျီသည်လုံးဝအသက်ရှူမဝသေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီး၌သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဝါဂွမ်းအင်္ကျီများထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုခြောက်သွေ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်မိုးရေတွင်ဖမ်းလျှင်ပင်သူ၏အင်္ကျီသည်ကြာရှည်စိုနေမည်မဟုတ်ပေ။ အဘိုးက Hoodie ၀ တ်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ရင်သေချာစဉ်းစားပါ ကြည့်ကောင်းတဲ့အင်္ကျီ ဒါမှမဟုတ် သက်တောင့်သက်သာရှိသော pullover henley hoodie ကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးအားလုံး
dressier ဂျာကင်အင်္ကျီကိုရှာနေသလား။ ဤချည်သား blazer ကိုမစည်းပါ သူသည်ဂျင်းဘောင်းဘီ (သို့) ဘောင်းဘီတိုဝတ်သည်ဖြစ်စေအဘိုးကိုကြည့်ကောင်းလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၉၅ ဒေါ်လာ
ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့နံရံအလှဆင်ပစ္စည်း မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားအိမ်မှာနေတဲ့တွင်းဒါမှမဟုတ်မိသားစုခန်းမှာချိတ်ဆွဲဖို့ကောင်းတယ်။ အဘိုးအဘွားများ၏အိမ်စည်းကမ်းများတွင်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အဆုံးမရှိပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်နမ်းခြင်းနှင့်မိသားစုဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုဝေမျှလိုသည့်အရာများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၂ x ၆ လက်မအထိအရွယ်အစားရှိပြီး၎င်းသည်ထက်မြက်ပြီးချစ်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုလိုအပ်သောကျဉ်းမြောင်းသောနံရံတစ်ခုအတွက်သင့်တော်သည်။ ဒီဇိုင်းသည်အမဲရောင်နှင့်အနီရောင်နှစ်မျိုးလုံးပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းကို MDF ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ပေါ့ပါးသဖြင့်နံရံကိုထိခိုက်မည်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းကိုချိတ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လာသည်။
စျေးနှုန်း: ၂၄.၉၉ ဒေါ်လာ
မည်သည့်အဖွား၏မီးဖိုချောင်တွင်မဆိုကောင်းမွန်သောအပြင်ဤထွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းပြားကိုအဖွား၏မီးဖိုချောင်တွင်လေဆာဖြင့်ထွင်းထားပြီးဒီဇိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် spatula နှင့် whisk တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒီဖြတ်တောက်ဘုတ်လေးတွေ ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၉.၅ គុណ ၆ လက်မရှိသည်။ အနားစောင်းများသည်ကိုင်ရအလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အလှဆင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှစ်ခုလုံးရှိပြီးအဖွားသည်ကလေးများနှင့်အတူချက်ပြုတ်နေစဉ်သူမ၏မီးဖိုချောင်၌ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: ၇.၆၁ ဒေါ်လာ
မင်းကလေးတွေရဲ့အဘိုးကပျော်စရာကောင်းအောင်နှိုးဆော်တာ၊ လက်ဆောင်တွေဝေငှတာ၊ သူတို့လမ်းမှားကိုနည်းနည်းပါးပါးခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကူညီရင်သူ့ကိုယူလိုက်ပါ။ ဒီနံရံပန်းချီ ဂန္ထဝင်သေတ္တာအမှတ်အသားပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မီးဖိုချောင်မှအလုပ်ရုံအထိနေရာတိုင်းကြည့်ကောင်းသည်။
ဆိုင်းဘုတ်သည်လုံးဝန်းသောထောင့်များနှင့်အနည်းငယ်စိတ်မ ၀ င်စားသောအကြည့်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ၄x၆ လက်မသာ ရှိ၍ ပုံတွင်မြင်ရသည်ထက်သေးငယ်သည်။ စိတ်နှလုံးသားနုသေးသောအဘိုးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဤနိမိတ်လက္ခဏာသည်ကလေးတစ်ယောက်အတွက်စံပြလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၂၆.၇၉ ဒေါ်လာ
အဘိုးအိုကိုဒဏ္legendာရီလို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးလား။ ဒီတီရှပ်အနက်ရောင် အဘိုးအို၊ လူသား၊ ဒဏ္thာရီ၊ ဒဏ္Legendာရီစကားလုံးများသည်အဘိုးအဘွားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလက်စွပ်ချည်သားချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤတီရှပ်သည်သက်တောင့်သက်သာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင်ပြေသောမှင်ဖြင့် USA တွင်ပြုလုပ်သည်။ အဘိုးအိုသည်၎င်းကိုအတွင်းအပြင်ရေအေးဖြင့်သေချာဆေးကြောပါ။ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ထားသောအရာသည်မပျက်စီးပါ။
စျေးနှုန်း: ၉.၃၀ ဒေါ်လာ
ဒါကမင်းအဖွားကိုပေးနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု၊ အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်ပါ။ စာအုပ်ကို ၀ ယ်ပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ကလေးများအားလက်ဆောင်မပေးမီစာမျက်နှာများကိုဖြည့်ပါ။ စာအုပ် grandkids များသည်သူတို့၏အဖွားအကြောင်းသူတို့နှစ်သက်သောအရာများကိုရေးသားနိုင်သောနေရာတွင်ဖြည့်စွက်ထားသောကွက်လပ်များနှင့်ပြည့်နေသည်။ သူတို့သည်ချိုမြိန်။ ရယ်စရာကောင်းနိုင်ပြီးအဖွားကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောတန်ဖိုးကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
အဖုံးစာအုပ်တွင်ပန်းရောင်အဖုံးပါရှိပြီးမေးခွန်း ၅၀ ရှိသည်။ မင်းကငါ့ကိုရယ်အောင်ရယ်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါသူတို့ကပြောကြတယ်…ပြီးတော့မင်းဆီကငါသင်ယူခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအရာက…အဖွားရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြည့်ရတာပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောနှလုံးသားလက်ဆောင်တစ်ခု။
အဘွား၏ Sippy ဖလား
အဘွားကသူ့မြေးနဲ့တူပါစေ သူမ၏အလွန်ကိုယ်ပိုင် sippy ခွက် (ဤသူသာလျှင်ဝိုင်ဖြည့်နိုင်သည်) double-wall vacuum insulation သည်အချိုရည်ကိုအပူဖြစ်စေအအေးဖြစ်စေတာကြာရှည်ခံသည်။ နွေရာသီပျော်ပွဲစားထွက်ရန်သို့မဟုတ်အေးသောရာသီဥတုအပြင်သွားရန်အလွန်ကောင်းသည်။
၎င်းကို ၁၈/၁၈ အစားအစာအဆင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမကျိုးမပေါက်ဘဲသံချေးနှင့်ခြစ်ရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခွက်သည် BPA မပါ ၀ င်ဘဲအဖုံး၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကောက်ရိုးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဖြီးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဝိုင်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဖျော်ရည်၊ ကော့တေး၊ ဆိုဒါ (သို့) အခြားအဖျော်ယမကာများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖျော်ရည် ၁၂ အောင်စအထိသင့်တော်သည်။
စျေးနှုန်း: ၂၉.၉၉ ဒေါ်လာ
ဂျိုးဇက်သပ် Chop2Pot ခေါက်နိုင်သောပလပ်စတစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အစုံ
အဘိုးအဘွားများအတွက်မီးဖိုချောင်သုံးလက်ဆောင်များ ၀ ယ်သောအခါမှားရန်ခက်သည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ဘေးကင်းစေသောအရာများဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် ဤခေါက်ထားသောပလပ်စတစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းပျဉ်ပြားများ မဖိတ်ဘဲဟင်းအိုး (သို့) ဟင်းအိုးထဲသို့တိုက်ရိုက်ပစ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဤသုံးအုပ်တွင်အလတ်၊ အလတ်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းပျဉ်ပြားများပါ ၀ င်သဖြင့်၎င်းတို့သည်မီးဖိုချောင်တိုင်းအတွက်တစ်ခုစီရှိလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဆု!
မင်းအဖွားရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုတောက်ပနေအောင်ကြည့်ရင် ဒီပျော်စရာပန်းကန်သုတ်ပဝါ သေချာပေါက်လုပ်လိမ့်မယ်။ Grandmas ကအနမ်းတွေ၊ ကွတ်ကီးတွေဘယ်တော့မှကုန်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီ့ဂါထာကပိုမှန်နိုင်တယ်။ သင်၏စာရင်းရှိအဖွားသည်သူမ၏မြေးများနှင့်ဖုတ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းသည်ကြီးမားပြီးပေါ့ပါးသောအရည်အသွေးမြင့်ဝါဂွမ်းပုဝါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ဖြင့်ဆေး။ အခြောက်ခံစက်သည်၎င်းပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောစိတ်ကိုမပျက်စီးစေပါ။
Kathy ၏ Primitives တွင်အဘွားအတွက်ပန်းသုတ်သုတ်များကိုရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။ ဤအရာများသည်စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောကြောင့်အဖွားနှင့်တူသောစုံတွဲကိုအဘယ့်ကြောင့်မရသနည်း အဘွားမပျော်လျှင်ပြေးပါ ပြီးနောက် မိဘများ ကျေးဇူးပြု၍ နံပါတ်ယူပါ မျက်နှာသုတ်ပဝါ။ ဤကုမ္ပဏီသည် Nana နှင့် Mimi တို့သွားသော grannies များအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။
ချစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် အခုဘယ်ရောက်နေလဲ စာရင်းပေးပါ။
စျေးနှုန်း: $ 17.99
အဘွား ၂၀၁၉ ဝိုင်ဖန်ခွက်သို့မြှင့်တင်ခဲ့သည်
ဒါကအဖွားအသစ်အတွက်၊ ဒါမှမဟုတ်သူမအဘွားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်ဒီလက်ဆောင်ကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ သတင်းကိုဖြိုဖျက်ရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မှန်များ အဘွားကို ၂၀၁၉ သို့မြှင့်တင်သောစာလုံးများဖြင့်ရေးထိုးထားသည်။ အကယ်၍ မင်းကမှန်ပေါ်မှာရေးထိုးထားတဲ့ကွဲပြားတဲ့နှစ်ကိုလိုချင်ရင်တုံ့ပြန်မှုအတွက်နာမည်ကောင်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါ။ ၎င်းကိုပို့ဆောင်နေစဉ်လုံခြုံစေရန်ဖန်ခွက်ပေါ်တွင်ပုံသွင်းထားသောအမြှုပ်ပါသောခိုင်ခံ့သေတ္တာတစ်ခုနှင့်ထုပ်ထားသည်။
စျေးနှုန်း: ၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Globe Glasses နှင့် Wine Savant World Decanter
စစ်မှန်သောချစ်သူများအတွက်ဝီစကီကိုနှစ်သက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်၊ ၎င်းကိုကောင်းမွန်သောဖန်ခွက်တစ်ခုတွင်ကျောက်ခဲများပေါ်တွင်ဖြည်းညင်းစွာချသည်။ မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကဝီစကီပုလင်းကိုရံဖန်ရံခါငိုက်မြည်းရင် ဒီ decanter set hit ဖြစ်ဖို့အာမခံပါတယ်။ decanter သည်မှောင်မိုက်သောမဟော်ဂနီသစ်သားခုံပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောအတွင်းမှဖန်သင်္ဘောတစ်ခုနှင့်လှပစွာစီခြယ်ထားသောမှန်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုမတ်တပ်ရပ်၌လည်းရေးထိုးထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျောက်မျက်မှန်နှစ်လုံးကိုကိုင်ထားသည်။
အတွေ့အကြုံကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေရန်ဤ decanter set တွင် granite whisky ကျောက်အစုံများပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မသောက်ဘဲဖြည်းဖြည်းချင်းသောက်နိုင်သည်။ သူတို့ကသူငယ်ချင်းတွေကိုမကြာခဏဖျော်ဖြေပေးရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် အလားတူ set ကိုရယူပါ ၎င်းတွင်နှစ်လုံးအစားကျောက်မျက်မှန်လေးလုံးပါလာသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၁.၁၅ ဒေါ်လာ
ငါ့မြေးဆီကိုစာတွေအခုရေးပါ။ နောက်မှဖတ်ပါ။ ထာဝရရတနာ
အက္ခရာ ၁၂ လုံးပါသောစာအုပ်သည်အဖိုးအဖွားများအားယခုနောက်ပိုင်းတွင်ပျော်စရာကောင်းစေရန်၊ နောင်တွင်သူတို့၏အဘိုးအဘွားများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘွားနှင့်အဘိုးများသည်သူတို့၏မြေးများအတွက်စာများရေးနိုင်ပြီးသူတို့ကိုချက်ချင်းပို့နိုင်သည် (သို့) အထူးအခါသမယများတွင်သူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
အက္ခရာများတွင်အထူးစတစ်ကာများပါ ၀ င်ပြီးနောက်ပိုင်းရက်များအတွက်နောက်နေ့အတွက်ကြိုတင်ရက်စွဲဆွဲထားနိုင်သည်။ သူတို့ရယ်စရာမှတ်စုများ၊ ပညာစကားများ၊ နှလုံးသားစာလုံးများကိုရေးသည်ဖြစ်စေ၊ မင်းကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေရောဒီလက်ဆောင်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
စျေးနှုန်း: ၈.၉၉ ဒေါ်လာ
Cookie Cutter Set ပါ
မင်းအဖွား (သို့) အဘိုးကအကောင်းဆုံးကွတ်ကီးတွေလုပ်လား။ သူတို့ကိုပိုပျော်စရာကောင်းအောင်ဒီ cookie cutter set ကိုပေးပါ။ သူ့မှာပုံစံမျိုးစုံလေးမျိုးပါရှိပြီးတစ်ခုစီကိုအရွယ်အစားမျိုးစုံနဲ့လာပါတယ်။
ကြယ်များနှင့်ပန်းများ၊ အသေးစိတ်စတုရန်းပုံနှင့်အဝိုင်းပုံစံများကိုအစုံလုပ်သည်။ အဘွားနှင့်အဘိုးအိုသည်အဘိုးအဘွားများအတွက်ကွတ်ကီးများပြုလုပ်ရာတွင်နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်မိသားစုချက်ပြုတ်နည်းကိုဖုတ်နည်းသင်ပေးရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကွတ်ကီးများကိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအဆင့်မြင့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံသည်။ သုံးစွဲသူများက၎င်းတို့အားအလွန်အမင်းထောက်ခံ။ ၎င်းတို့ကိုစျေးနှုန်းကြီးကြီးမားမားထုတ်ကုန်တစ်ခုဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စျေးနှုန်း: ၂၅.၄၅ ဒေါ်လာ
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကမင်းဆီကိုလာဖို့လေယာဉ်စီးရမလား။ BCOZZY ခရီးသွားလည်ပင်းခေါင်းအုံးဖြင့်အနားယူပြီးပိုမိုလွယ်ကူသောခရီးသွားလက်ဆောင်ကိုပေးပါ။ ၎င်းသည်အစွန်အဖျားများကိုတစ်ခုစီ၏ထိပ်တွင်ထားပြီးမေးစေ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ မေးစေ့ဧရိယာကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီးဘေးနှစ်ဖက်၌အပိုကူရှင်ပါ ၀ င်သည်။
ကျောချပ်ချပ်သည်လည်ပင်းခေါင်းအုံးများနှင့်မတူဘဲသင့်ခေါင်းကိုရှေ့သို့တွန်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်စက်ကိုဆေးကြောနိုင်ပြီးခရီးဆောင်အိတ်ပေါ်သို့တင်နိုင်သောသိုင်းကြိုးပါလာသည်။ ၎င်းကိုကြားနေအရောင်များမှတောက်ပသောအစိမ်းရောင်အထိအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၂.၇၉ ဒေါ်လာ
အဘွားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာခက်ပါတယ်။ ငါအဖွားဖတ်တဲ့ဒီမတ်ခွက်နဲ့မင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်မှုကိုပြပါ။ မင်းရဲ့စူပါပါဝါကဘာလဲ။
လက်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောကြွေခွက်သည်ခရင်မ်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီးခရင်မ်အရောင်များနှင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လုံခြုံပြီး FDA ထောက်ခံချက်ရသည်။ ၎င်းတွင်ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် (သို့) အဖွား၏အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာသည်ဘာမဆိုရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၁၁.၆၉
သစ်သားဓာတ်ပုံဘောင် Shadow Box
၄x၆ ဘောင်နှစ်ထပ်ကိုအရည်အသွေးမြင့် MDF သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဒေါင်လိုက်ရပ်တည်သည်။
အဘိုးအဘွားများသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်သောဓာတ်ပုံများဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်လက်ဆောင်မပေးမီဓာတ်ပုံများကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ အချို့ဝေဖန်သူများက၎င်းကိုကလေးများအတွက်ပန်းချီကားများအတွက်သုံးနိုင်သည်ဟုထောက်ပြသည်၊ ၎င်းသည်အခြားပျော်စရာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၇.၀၅ ဒေါ်လာ
ဤမိသားစုသစ်ပင်ဇယားသည်အဘိုးအဘွားများအတွက်အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်အမိန့်တစ်ခုလျှင်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းကိုအဘိုးအဘွားနှစ် ဦး အားလက်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည်အဘိုးအဘွားများကိုယ်တိုင်ဖြည့်နိုင်သောအသေးစိတ်ပုံကြမ်းပုံစံခွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကနာမည်တွေရေးပြီးသူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဘယ်မျိုးဆက်နဲ့မဆိုစနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်မပေးမီ၎င်းတို့အတွက်ဖြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကျယ် ၁၉ လက်မနှင့်အမြင့် ၁၃ လက်မရှိပြီး၎င်းအားလုံးကိုဖြည့်လိုက်သောအခါအလွန်ကောင်းမွန်သောဘောင်ခတ်အလှဆင်သည်။
ကြားနေ၊ ကြော့ရှင်းသောစက္ကူတွင်ရေးရန်လွယ်ကူသော vellum finish တစ်ခုပါ ၀ င်သော်လည်းအလှဆင်အဖြစ်လည်းကြည့်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်နှင့် lignin တို့ပါ ၀ င်ပြီးမယိုယွင်းပါ။ ၎င်းသည် Green Seal TM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်အသုံးပြုပြီးနောက်စားသုံးသူအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
စျေးနှုန်း: ၉၉.၀၀ ဒေါ်လာ
23andMe DNA စမ်းသပ်ကိရိယာ
23andMe မှလူကြိုက်များသော DNA စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာသည်သင်၏အဘိုးအဘွားများအားသူတို့၏မိသားစုသစ်ပင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်၎င်းကိုသင်နှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအားမျှဝေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်သုံးကိရိယာသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးကိုယ်ပိုင်သီတင်းပတ်ခြောက်ပတ်မှရှစ်ပတ်အတွင်းသင့်အိမ်သို့ကိုယ်ပိုင်မျိုးရိုးမှတ်တမ်းများကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမျိုးရိုးဒေသ ၁၅၀ ကျော်နှင့် ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းသာကွဲသွားပြီးဘိုးဘွားများကသူတို့၏မျိုးရိုးနှင့်မင်း၏ DNA ကိုမိတ်ဆက်သောအခါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘိုးဘွားဒေသများသင်ယူခြင်း မှလွဲ၍ အဖိုးအဖွားများသင်ယူနိုင်သည်သူတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးရိုးကိုရှာဖွေပြီးသူတို့မိသားစုရဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကိုခြေရာခံကြည့်ပါ။
ဒါကမျိုးရိုးဗီဇကွဲစေတဲ့ပထမဆုံးစားသုံးသူ DNA စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီးရလဒ်တွေကနေ့တိုင်းပိုသန့်စင်လာတယ်။
ဝေဖန်သူများကအဘိုးအဘွားများသည်လက်ဆောင်ကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အချို့မှာပျောက်ဆုံးသွားသောဆွေမျိုးများနှင့်၎င်းတို့မသိခဲ့သည့်မိသားစုမူလအစများကိုသင်ယူသည်။ ၎င်းသည်မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လက်ရှိမိသားစုယူနစ်များ၏ဘိုးဘေးများ/ဘိုးဘေးများကိုပေးရန်သင့်တော်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၀၃.၈၁ ဒေါ်လာ
မင်းအဘိုးအဘွားတွေရဲ့ကိရိယာတွေကနည်းနည်းဟောင်းပြီးလေးလွန်းတယ်ဆိုတာမင်းသတိထားမိလား။ အခြေခံအိမ်ထောင်စုတာဝန်များအတွက်လူတိုင်းလိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည် ဤကြိုးမဲ့တူးစက်/မောင်းသူ ၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်သောစည်းဝေးပွဲများနှင့်ပိုခက်ခဲသောတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာတွင်ဘက်ထရီအားသွင်းစက်နှင့်အမြန်အားသွင်း ၂၀ ဗို့ MAX လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဓာတ်ခဲနှစ်လုံးနှင့်ခရီးဆောင်အိတ်တစ်ခုပါလာသည်။
ဤကြိုးမဲ့အပေါက်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီးတင်းကျပ်သောနေရာများသို့ရောက်ရန်လုံလောက်သည်။ အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ဂီယာကသူတို့ကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုမတူညီတဲ့အမြန်နှုန်းနှစ်ခုနဲ့လည်ပတ်စေပြီး bitchecking chuck ကြောင့်အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေရဲ့ tool collection ကိုအဓိကအဆင့်မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့အကြံပြုချင်ပါတယ် DeWALT ၂၀ ဗို့ Combo Kit ၎င်းတွင်ကွဲပြားသောကိရိယာလေးမျိုးပါ ၀ င်သည်၊ အားလုံးသည်ဘက်ထရီတစ်ခုတည်းတွင်သုံးသည်။
စျေးနှုန်း: ၈.၉၀ ဒေါ်လာ
ချာလီဘရောင်းခရစ်စမတ် Remastered & Expanded ထုတ်ဝေမှု
လူတိုင်းသည် A Charlie Brown Christmas တေးသံကိုနှစ်သက်ပြီးအဖွားနှင့်အဘိုးအတွက်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ grandkids များနှင့်အားလပ်ရက်ပါတီများအတွင်းကွတ်ကီးများဖုတ်နေစဉ်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုနားထောင်နိုင်သည်။
remastered edition တွင်ကြီးသောအသံအရည်အသွေးနှင့်အပိုပုဒ်အချို့ပါ ၀ င်သည်။ ပိုခေတ်စားသောအဘိုးအဘွားများအတွက်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်အဖိုးအဖွားများအတွက်ဗီနိုင်းပေါ်တွင်ဝယ်ပါ၊ CD ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ MP3 တွင်ဖြစ်စေဝယ်ပါ။
ချာလီဘရောင်းခရစ်စမတ်သည်သင်၏ခရစ်စမတ်အမှတ်တရများဖြစ်လျှင်တေးဂီတ CD တစ်ချပ်သည်ပိုင်ဆိုင်ရကျိုးနပ်သည်ဟုဝေဖန်သူတစ် ဦး ကဆိုသည်။
၎င်းတွင်မူရင်းရုပ်ရှင်မှသီချင်းများနှင့် Vince Guaraldi တီးသောသီချင်းများအားလုံးရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၄၀.၉၅
ဤလှပသောငွေလည်ဆွဲသည်အဖွားအတွက်အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတစ်သက်တာကြာရှည်ခံသော 925 စတာလင်ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ခဲနှင့်နီကယ်မပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်၏အသားအရေကိုမထိခိုက်စေဘဲအစိမ်းသို့မဟုတ်အနီရောင်သို့မပြောင်းပါနှင့်။ ကွင်းဆက်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော်လည်းခိုင်ခံ့သည်၊ ၎င်းတွင်တစ်ခုခုဖြစ်လျှင်ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်းအားငါးနှစ်အာမခံကာလအတွင်းအစားထိုးပေးလိမ့်မည်။
ငွေရောင်လက်စွပ်များသည်အဖွား၊ သမီးနှင့်သူမ၏မြေးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကမျိုးဆက်သုံးဆက်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသပြီးသူမကိုမင်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုသူ့နှလုံးသားနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေခွင့်ပြုပါ။
လည်ဆွဲသည် ၁၉ လက်မရှိပြီးနွေ ဦး လက်စွပ်ရှိသည်။ ဒါဟာအဖိုးအဖွားတွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့်လှပပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့လက်ဆောင်ပါ။
စျေးနှုန်း: ၁၅.၉၅ ဒေါ်လာ
အဘိုးအဘွားတစ် ဦး သည်နှလုံးသားနှင့်အမြဲနီးကပ်စွာဘေးချင်းကပ်လျက်သို့မဟုတ်မိုင်ပေါင်းများစွာခြားပြီးအဘိုးအဘွားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးသောဤကမ္ပည်းပြားကိုဖတ်သည်။ ကြွေပြားကိုအမေရိကန်တွင်ပြုလုပ်ပြီး ၄ x ၆ လက်မရှိသည်။
ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုစီကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောရွှံ့စေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအနုပညာရှင် Deborah Jurist ၏မူရင်းပုံများနှင့်စာသားများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။၎င်းကိုအရောင်တောက်သောအ ၀ ါနှင့်အပြာရောင်အက္ခရာဖြင့်ဖုတ်ထားသောသဘာဝအရောင်ကျောက်စရစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို Vermont ရှိ Mountain Meadows Pottery စတူဒီယိုတွင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အဘိုးအဘွားတွေကသူတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်၊ ဧည့်ခန်း၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလေးတွေရဲ့ဘ ၀ မှာသူတို့ရဲ့အထူးအခန်းကဏ္ofကိုသတိရစေလိုတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း: $ 25.00
အိုင်ယာလန် Clover Knot Embossing Rolling Pin
အဘွားများနှင့်အဘိုးအဘွားများသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးကလေးငယ်များနှင့်အတူဖုတ်ရန်အထူးသဖြင့်ထိုမုန့်ဖုတ်ပုံတွင်အရသာရှိသောကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်များပါ ၀ င်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောမုန့်ဆိုင်မှလာသည့်ကဲ့သို့အဖုတ်တိုင်းကိုကြည့်ကောင်းစေသည်။ ဒီလိပ်တံ အခြားဒီဇိုင်းများအများကြီးရှိသော်လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ Irish clover ထုံးကိုချန်ထားပါ။
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေအတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုအထူးတလည်ရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီအားလပ်ရက်မှာပုံဆောင်လိပ်တံအလိပ် ခဏတာသည်ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရိုးရာအနုပညာလက်ရာများသည် rolling pin ကိုဒီဇိုင်းထုတ်သည် မည်သည့်ရိုးရှင်းသောသကြားကွတ်ကီးကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့ယူလိမ့်မည်။ ဤလှိမ့်တံများကိုလေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော beechwood ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောလက်ကိုင်များနှင့်ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
စျေးနှုန်း: ၅၉.၄၅ ဒေါ်လာ
မင်းအဘိုးအဘွားတွေကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုခဏခဏကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကလက်ဖက်အိတ်တစ်ဗူးပေးမယ့်အစားသူတို့ရဲ့လက်ဖက်ရည်အတွေ့အကြုံကိုထူးထူးခြားခြားဘာကြောင့်မမြှင့်တင်တာလဲ။ ဤ Blooming Tea Set လက်ဖက်ရည်ကိုဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်ပြောင်းသည်။ ကြည်လင်သော borosilicate ဖန်အိုးသည်ထည့်ထားသောလက်ဖက်ပန်းများကိုအိုးအတွင်း၌ပွင့်စေသောစံပြသင်္ဘောဖြစ်သည်။
ဤအစုတွင်အိုး၊ ပေါင်းချောင်ရွက်အားလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော diffuser တစ်ခုအပြင်နှစ်ထပ်နံရံကပ်လက်ဖက်ရည်လေးခွက်၊ အိုးတစ်လုံးအပူနှင့်လက်ဖက်ပန်း ၁၂ မျိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။ insulated ခွက်များသည်လက်ဖက်ရည်သောက်နေစဉ်လက်ချောင်းများကိုမီးမလောင်ဘဲကောင်းကောင်းနှင့်ပူစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤအရာသည်သူတို့နှင့်စိတ်ရှုပ်စေချင်သည်ထက်ပိုပုံရသည်၊ ချစ်စရာကောင်းသောလက်ဖက်ရည်လက်ဆောင်ခြင်းတောင်းကိုလည်းအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: ၁၅၄.၉၉ ဒေါ်လာ
WiFi မှတဆင့် cloud နှင့်ချိတ်ဆက်သောဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင်နှင့်အတူအမှတ်တရများကိုလှိမ့်ထားပါ။4GB memory သည်ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၅၀၀၀ အထိဆံ့သောကြောင့်အဖွားနှင့်အဘိုးသည်သူတို့၏မြေးများအားလုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိနေနိုင်သည်။
သူတို့သည်ဘောင်ပေါ်မှဓာတ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်လက်ခံနိုင်သည်။ မင်းသူတို့ကိုမြင်စေချင်တာတစ်ခုခုရှိရင်ဘောင်ရဲ့သီးသန့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပို့လိုက်ရုံနဲ့သူတို့ကဓာတ်ပုံကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့မြေးလေးတွေဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းကြောင်းကြွားချင်ရင်သူတို့ဘောင်ကနေဓာတ်ပုံတွေကိုသူငယ်ချင်းတွေကိုပို့နိုင်တယ်။
ဒီ Frame က Facebook, Flickr နဲ့အခြားဓာတ်ပုံဝေမျှတဲ့ site ၂၀ ကျော် ၁၈ ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုထဲကိုစက်တစ်လုံးလုံးကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာဘောင်ကနေမိုးလေဝသအခြေအနေကိုတောင်နောက်ဆုံးသတင်းရနိုင်တယ်။
စျေးနှုန်း: ၉.၉၉ ဒေါ်လာ
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကဟာသတွေအမြဲလုပ်နေတာလား။ သူတို့ကိုဒီစာအုပ်ကိုယူပါ 1001 ပြောဖူးသမျှထဲမှာရယ်စရာအကောင်းဆုံးအရာများ သူတို့ကိုပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုပေးပါ။ စာအုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်မရည်ရွယ်ဘဲလက်ခုပ်တီးခြင်း၊ ပေါင်နှီးခြင်း၊ ထိုးခြင်းနှင့်အရာအားလုံးနှင့်သင်၏ရယ်စရာအရိုးကိုလှုပ်ခတ်စေမည့်အရာများစုဆောင်းခြင်းဟုခေါ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၂၄.၂၀ ဒေါ်လာ
ဒီကော်ဖီပူပူကိုရုံးမှာရောအိမ်မှာရောအလွယ်တကူသုံးနိုင်ပြီးတစ်နေ့တာလုံးကော်ဖီသောက်တဲ့သူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ၁၇ ဝပ်မတ်ခွက်အပူပေးစက်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးဝှက်ထားသောပလပ်ပေါက်များသို့ရောက်ရန်ရှည်လျားသောပါဝါကြိုးရှိသည်။
၎င်းကိုဖွင့ ်၍ သင်၏ကော်ဖီကိုနာရီနှင့်နာရီပေါင်းများစွာနွေးအောင်ထားပါ။ အအေးမသောက်ခင်တစ်ခွက်အပြည့်သောက်ရန်အချိန်မရှိသော၊ အလုပ်များသောအဘိုးအဘွားများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
စျေးနှုန်း: ၄၃.၂၅ ဒေါ်လာ
သင်၏အဖိုးအဖွားများ၏ဥယျာဉ် (သို့) ပန်းသေတ္တာများကိုဤကြေးနီရေလောင်းခြင်းနှင့်အတူကူညီပါ။ ၎င်းသည်အိုး ၁.၆ လီတာနှင့်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့သယ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သောအလင်းရောင်ရှိသည်။
စျေးနှုန်း: $ 19.99
ဤ Anthurium အပင်ကို၎င်း၏အနီရောင်နှလုံးပုံပန်းများပွင့်စေသော flamingo ပန်းဟုလည်းလူသိများသည်။ အဖွားနှင့်အဘိုးအို၏အိမ်ကိုပြုစုရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရောင်အသွေးစုံလင်သောအပင်နှင့်အတူတောက်ပစေသည်။ သူတို့လုပ်ရမှာကတစ်ပတ်တစ်ခါရေခဲတုံးထည့်ပါ။
Anthurium သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးပွင့်သောအပင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်လှပသောပန်းများကိုရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင်ထားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကခရစ်စမတ်စားပွဲပေါ်မှာအလှဆင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိုချင်တဲ့အရောင်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်။
အပင်သည် ၅ x ၅ x ၁၆ လက်မခန့်ရှိသည်။ ရေခဲထည့်နည်းသည်မမှားနိုင်ပါ၊ သို့သော်သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွမ်းကျင်ရောင်းချသူများကိုအချိန်မရွေးအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: $ 199.99
Comfier Shiatsu လည်ပင်းနှင့်နောက်ကျော Massager
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသဘာဝအားဖြင့်ပိုကိုက်ခဲသည်။ လူတွေကသူတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေနဲ့တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်ရောက်ရင်သူတို့ကအဖေ့ကိုငယ်ရွယ်သေးရင်တောင်တစ်နေ့တာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖြေဖျောက်ဖို့နွေးထွေးမှုနဲ့ shiatsu အနှိပ်အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဒီကုလားထိုင် massager အဘိုးအဘွားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သက်သောလက်ဆောင်တစ်ခုသည်၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်။ စိတ်သက်သာရာရစေသည်။
ဤအနှိပ်သည်အိမ်တွင်သက်တောင့်သက်သာစိတ်ကြိုက်နှိပ်နယ်နိုင်ရန်လည်ပင်း၊ ပခုံး၊ နောက်၊ ခါးနှင့်ပေါင်များကိုနှိပ်နယ်ပေးသည်။ Shiatsu massage node များသည်နက်ရှိုင်းသောတစ်သျှူးများကိုနှိပ် ပေး၍ လေအိတ်များသည်သင့်တင်ပါး၊ ပေါင်နှင့်ခါးနေရာများကိုချုံ့ပေးသည်။ ပြင်းထန်သောအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ဤကူရှင်သည်နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပြင်ကာယလှုပ်ရှားမှုမှကြွက်သားများနာကျင်စေသည်။
လည်ပင်းနှင့်ပခုံးအတွက်အထူးပြဿနာများအတွက်ချုံ့ခြင်း၊ တူရိယာနှင့် shiatsu နှိပ်စက်များဖြင့်ထိုဒေသများကို ဦး တည်ရန်လည်ပင်းအနှိပ်များစွာရှိသည်။
အဆိုတော် Heavy Duty အပ်ချုပ်စက်
အဘွား၏အပ်ချုပ်စက်သည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ အဆိုတော်ထံမှဤလေးလံသောတာဝန်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလက်ဆောင်နှင့်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ၎င်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောချုပ် ၃၂ ခုအပါအ ၀ င်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ မင်းအဘိုးအဘွားတွေရဲ့ဝါသနာကပိုလွယ်လာပြီးပိုပျော်စရာကောင်းလာတယ်။
ဤတွင်အခြေခံချုပ်ရိုးခြောက်ခု၊ ဆန့်စင်း ၇ ခု၊ ​​အလှဆင်စတစ်ကာ ၁၈ ခုနှင့်အလိုအလျှောက်အလိုအလျောက်တစ်လှမ်းချင်းခလုတ်များပါရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အဖွားမှာမျက်စိကွယ်လျှင်အလိုအလျောက်ချည်ထိုးအပ်တစ်ချောင်းပါ ၀ င်သည်။
ဤအဆိုတော်အပ်ချုပ်စက်သည်မြန်သည်၊ ၎င်းသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၁၁၀၀ စုတ်ထုတ်သည်။ ၎င်းတွင်စံအပ်ချုပ်စက်များထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုအားကောင်းသောမော်တာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အလွယ်တကူသက်တောင့်သက်သာရှိသောလေးလံသောအထည်များဖြင့်ချုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်မကပ်သောအစာ၊ ဆေးထိုးအပ်ငါးထုပ်နှင့်ချုပ်ရိုးအတွက်ပန်းကန်ကဲ့သို့အပိုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် Singer ၏အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြချက်ကောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းအဘွားကကျွမ်းကျင်တဲ့အပ်ချုပ်သမားလား၊ အပျော်ချုပ်လားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူကဒီလက်ဆောင်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။
စျေးနှုန်း: ၂၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Kindle Oasis e-Reader ဖြစ်သည်
၎င်းသည်ရရှိနိုင်သောအကြီးဆုံး Kindle ဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံး resolution display နှင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဘိုးအဘွားများသည်အခြား e-reader များထက်ဖတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ တောက်ပသောနေရောင်အောက်၌ပင်တောက်ပမှုမရှိဘဲစက္ကူအစစ်ကဲ့သို့ဖတ်သည်။ အခုဆိုရင်အဘွားနဲ့အဘိုးအိုတွေကသူတို့ရဲ့မုတ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးစာအုပ်တွေအဆုံးမရှိဖတ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လာလည်တဲ့အခါသူတို့နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖတ်နိုင်တယ်။
ဤ Kindle သည်ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့်ကမ်းခြေနှင့်နီးလျှင်သို့မဟုတ်ရေကန်ရှိလျှင်သူတို့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်သူတို့သည် Kindle မှတဆင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များကိုနားထောင်နိုင်သည် ကြားနိုင်သော မရ။ စာအုပ်တစ်သန်းကျော်အပြင်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်းစာများကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်သည်။
e-reader တွင်စာမျက်နှာလှည့်ခလုတ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သောရှေ့မီးတို့ပါ ၀ င်သော ergonomic ဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည်။ ဘထ္ထရီတစ်လုံးအားသွင်းခြင်းသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မခက်ပါ။
ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်သို့အကန့်အသတ်မရှိ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၉.၃၆ ဒေါ်လာ
မစ္စစ် Meyer ၏သန့်ရှင်းသောနေ့မွှေးကြိုင်သော Soy Candle
မင်းအဖွားကသန့်ရှင်းတဲ့အိမ်ရဲ့ရနံ့ကိုကြိုက်လား။ သန့်ရှင်းရေးကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်ထားသောဤဖယောင်းတိုင်များကိုသူမအားယူပါ။ သူတို့သည်လတ်ဆတ်သော lavendar အနံ့နှင့်ချစ်စရာအိုးများထဲသို့ရောက်လာသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့ကိုပဲပိစပ်နှင့်ဟင်းရွက်ဆီတို့ကဲ့သို့ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဖယောင်းတိုင်များသည်သတ္ထုနှင့်သတ္တုမပါသောကြောင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဖန်ပုလင်းတစ်လုံးထဲတွင်ပါလာသည်။ မီးစာသည် ၃၅ နာရီကြာလောင်ကျွမ်းသည်။ ၎င်းသည်အဘိုးအဘွားများအတွက်သာမကသင်၏ဆရာ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏စာရင်းထဲရှိအခြားမည်သူမဆိုအတွက်ကြီးမားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၀.၉၉ ဒေါ်လာ
ဤချစ်စရာသော့ချိတ်များသည်အလွန်ကောင်းသော stocking stuffer တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအနားကပတ်လည်မှာ Hope Trust Love Dream လို့ပြောတဲ့ငွေကွင်းတစ်ခုရှိတယ်၊ အဖွားဖြစ်ဖြစ်အဘိုးဖြစ်ဖြစ်ပြောထားတဲ့အလယ်ဗဟိုမှာရွှေနှလုံးသားတစ်ခုရှိတယ်။
စျေးနှုန်း: $ 20.00
အမေရိကန်ပြည်နယ်နှစ်ခု၏ပုံစံများဖြင့်ဤလက်ဆောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ စာသားသည်အဘိုးအဘွားများနှင့်မြေးများကြားရှိအချစ်သည်ပုံနှိပ်၏ထိပ်တွင်အကွာအဝေးမရှိကြောင်းကို သိ၍ အောက်ခြေတွင်အချစ်ဟု [အမည်ထည့်ပါ] ဟုဆိုထားသည်။
၎င်းတွင်တစ်ခုစီ၌နှလုံးသားများကိုအစက်အပြောက်ပါသောအဖြူရောင်ပြည်နယ်ကောက်ကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ နောက်ခံအရောင်ကိုလည်းသင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်အားလုံးကိုအလုပ်ပိတ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းဖလော်ရီဒါမှပို့သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနောက်ဆုံးမိနစ်လက်ဆောင်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါ frame တစ်ခုဝယ်ပါ။
စျေးနှုန်း: ၃၉.၉၉ ဒေါ်လာ
ဤလျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးသည်လက်ဖက်နှစ်သက်သောအဘိုးအဘွားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလုံခြုံပြီးအစားအစာအဆင့်၊ BPA မပါသောပစ္စည်းများနှင့်ရေနှင့်ထိတွေ့သောပလပ်စတစ်မပါပါ။
၎င်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းပညာရှိပြီးဗြိတိသျှနည်းပညာကိုသုံးသောခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ရေပွက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပိတ်သွားပြီးသင်စဉ်းစားရန်ပင်မလိုတော့ပါ။ အပြာရောင် LED မီးအချက်ပြမီးသည်သင်၏ရေသည်ပွက်ပွက်ဆူနေသည်ကိုသင်သိပါစေ။
ရေနွေးအိုးတွင်သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသောကျယ်ပြန့်သောပါးစပ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေစွာလောင်းရန်အခြေခံကိုဖယ်ရှားသည်။ ၎င်းသည်ရေ ၁.၇ လီတာနှင့် ၁ နှစ်အာမခံပါ ၀ င်သည်။
စျေးနှုန်း: ၃၈.၀၀ ဒေါ်လာ
Charles the Drinking Chocolate Snowman ဖြစ်သည်
ဤချစ်စရာကောင်းသောချောကလက်သောက်နှင်းကျနှင်းကျသူသည်အအေးဆုံးဆောင်းရာသီကိုပင်တောက်ပစေလိမ့်မည်။ Snowman Charles ကို dark chocolate နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး hot cocoa mix နှင့် marshmallows တို့ဖြင့်ဖြည့်သည်။ လက်ခံသူလုပ်ရမည့်အရာသည်အရသာရှိသောကိုကိုးပူပူအတွက်နွားနို့ (သို့) ရေနွေးတစ်အိုး၌အရည်ပျော်စေသည်။
နှင်းမုန်တိုင်းသည် ၅ မှ ၈ ခွက်အထိလုံလောက်သောပူကိုကိုးများကိုပြုလုပ်သည်။ (grandkids များအတွက်လုံလောက်သည်!) ၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသော stocking stuffer တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အေးသောဆောင်းရာသီတွင် cocoa ကိုစုပ်သောအခါသူတို့ကမင်းကိုစဉ်းစားလိမ့်မယ်။
စျေးနှုန်း: ၁၂.၀၃ ဒေါ်လာ
Menus: Jacques Pépinမှသင်၏အစားအစာများနှင့်အမှတ်တရများအတွက်စာအုပ်
သင့်စာရင်းရှိတစ်စုံတစ် ဦး သည်အထူးမိသားစုဟင်းချက်ချက်ရှိပါသလား။ ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဤအရာသည်ကြီးကျယ်သောချက်ပြုတ်သူများ (သို့) ပြင်သစ်နာမည်ကြီးစားဖိုမှူး Jacques Pépin၏ပရိတ်သတ်များအတွက်အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤလှပသောသရုပ်ဖော်ပုံဂျာနယ်သည်လက်ခံသူအားဂုဏ်ပြုပွဲများမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်Pépinကိုယ်တိုင်ပန်းချီကားများနှင့်ပြည့်စုံစေသည်။ စာအုပ်သည်သူအကြိုက်ဆုံးပန်းချီကားများကိုစုဆောင်းပြီးအဖွားနှင့်ညစာအတွက်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ညစာစားပွဲများ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ တေးဂီတများနှင့်မီနူးများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာချန်ထားသည်။ ဧည့်သည်များသည်သူတို့၏နာမည်များရေးထိုးနိုင်ပြီးမှတ်စုများထားခဲ့နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။
၎င်းသည်မည်သည့်ပွဲတွင်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအရာကိုလက်တွေ့ကျသောသတိပေးချက်တစ်ခုနှင့် menu များနှင့်အမှတ်တရများသိုလှောင်ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကနောင်လာမယ့်နှစ်တွေမှာမိသားစုမှာလိုချင်လိမ့်မယ်။
စျေးနှုန်း: ၃၆.၀၀ ဒေါ်လာ
တစ်ခါတစ်ရံစားသုံးနိုင်သောလက်ဆောင်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သံပုရာမုန့်ချိစ်နှင့်အတူဤအုန်းသီးထုပ်ကိတ်မုန့်ကိုဖွင့်ထားသည် Oprah ၏အကြိုက်ဆုံးအရာများစာရင်း အကြောင်းပြချက်ကောင်း။
၈-၁၀ ကြိမ်ပါ ၀ င်သောကိတ်မုန့်ကိုကျုံ့ပြီးလှပသောစိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်သေတ္တာတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။ နှင်းခဲသည်ကိတ်တစ်ခု၏အလယ်ဗဟိုတွင်ခွက်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ ၎င်းကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်နွေးပြီးအုန်းသီးအုံပေါ်တွင်ဖွဲပေးပါ။ ၎င်းကိုစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သေတ္တာတစ်လုံးသို့ပို့ဆောင်သည်။
လေဖိအားနှင့်အပူတို့ပါ ၀ င်သောဤအံ့သြဖွယ်ခြေဖဝါးနှိပ်စက်ဖြင့်သူတို့၏ခြေထောက်များကိုအနားယူပါ။ ၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်၊ ရက်ရှည်အကြာတွင်ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ခြေဖဝါးကိုဖိအားပေးခြင်းနှင့်လေဖိအားပေးခြင်းသည်အခြားခြေဖဝါးနှိပ်နယ်မှုများထက်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်စေသည်၊ ၎င်းကိုသင်၏နာကျင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ပြင်းထန်မှုအဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
မင်းလုပ်ရမှာကမင်းရဲ့ခြေဖဝါးကိုနှိပ်နယ်ပေးပြီးပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်၊ အပူ၊ လေဖိအားနဲ့နှိပ်နယ်မှုအတွက်ပြင်းထန်မှုကိုရွေးပါ။
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကနှိပ်နယ်တာဒါမှမဟုတ်ကာယကုထုံးအတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးရင်ဒါကမင်းရဲ့လည်ပတ်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကနာကျင်မှုသက်သာအောင်တောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ massager သည်ရက် ၉၀ ငွေအပြည့်ပြန်ပေးသည်။
ဤ lasagna သုံးဒယ်အိုးသည်အကြောင်းကောင်းများကြောင့် Oprah ၏အကြိုက်ဆုံးစာရင်းတွင်ရှိသည်။ ကွဲပြားသောအရသာများနှင့်အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်တော်သောဒယ်အိုးတစ်ခုတွင် lasagna အမျိုးအစားသုံးမျိုးအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းကို lasagna pan ဟုခေါ်သော်လည်း၎င်းကိုပေါင်မုန့်၊ ကိတ်နှင့်အခြားအရာများအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ဒယ်အိုးကိုမီးဖုတ်ရန်လွယ်ကူသောစိတ်ကူးအပူပေးသည့်အလူမီနီယံသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Non-stick coating သည်ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖုတ်ထားသောအရာများကိုအပြင်သို့ချော်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံသည်။
ဒယ်အိုးသည် ၁၃ လက်မ ၉ လက်မ ၁ လက်မ/၂ လက်မ ၎င်းသည်အပူချိန် ၄၅၀ ဒီဂရီအထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်၏စာရင်းထဲရှိမည်သည့်ချက်ပြုတ်သူမဆိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: ၁၆၉.၀၀ ဒေါ်လာ
ခွေး DNA စမ်းသပ်မှုအစုံ
အဘွားနဲ့အဘိုးကသူတို့ရဲ့ခွေးကလေးကိုချစ်သလား၊ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မျိုးရင်းအတိအကျကိုမသေချာဘူးလား။ သူတို့မှာကယ်ဆယ်ရေးခွေးရှိရင်အဲဒါကတခါတရံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဤ DNA kit သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးတိကျသောရလဒ်များပေးသောကြောင့်ရိုးရှင်းသောပါးပြင်ဖြင့်သူတို့သည်ခွေး၏မိသားစုသစ်ပင်ကိုအဖိုးအဖွားများအထိတောက်လျှောက်သင်ယူနိုင်သည်။
ဒီကိရိယာဟာခွေးမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်အတွက် coyote နဲ့ wolf အပါအ ၀ င်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရောဂါ ၁၆၀ ကိုစစ်ဆေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သူတို့၏ခွေး၏ကျန်းမာရေးကိုသတိပြုနိုင်ပြီးလိုအပ်သောကုသမှုများအတွက်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နှစ်ပတ်မှလေးပတ်အတွင်းရလဒ်များရရှိရန် Cornell University College of Veterinary Medicine နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
သူတို့မှာခွေးအသစ်ရှိရင်မင်းကဘယ်လောက်ကြီးလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုတာကိုတောင်ပြောပြနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွေးချစ်သူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Amazon Echo ဖြင့်သူတို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤစမတ်စပီကာသည်ရာသီဥတုနှင့်အသွားအလာမှအရာအားလုံးကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကအချက်အလက်တွေရှာဖို့ကွန်ပျူတာတွေ၊ စမတ်ဖုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းမသုံးရင် Alexa ကရိုးရှင်းပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရမှာကခလုတ်တွေ၊ ကီးဘုတ်တွေကိုသွားမယ့်အစားမေးပါ။
၎င်းသည်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ၊ ရေဒီယိုနှင့်သတင်းများကိုအခြားအရာတို့တွင်ကစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မေးခွန်းများဖြေခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ ရာသီဥတုကိုပြောပြခြင်း၊ အားကစားရမှတ်များအစီရင်ခံခြင်း၊ တီဗီကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်။ Echo တွင်မိုက်ခရိုဖုန်းခုနစ်လုံးနှင့် beamforming နှင့် noise-cancelling နည်းပညာတို့ပါ ၀ င်ပြီးမည်သည့် ဦး တည်ချက်မှမဆိုသင်ကြားနိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Vibrathotics Vibrating Shoe Insoles များ၊
မင်းအဘိုးအဘွားတွေလိုအသက်ကြီးသူတွေမှာအဖြစ်များတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒါကခြေထောက်နာတာပဲ။ ၎င်းသည် plantar fasciitis, fibromyalgia, သို့မဟုတ် neuropathy တို့မှဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည်ဆေးသောက်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချရန်မလိုဘဲသက်သာမှုအချို့ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ Vibrathotics တုန်ခါမှုဖိနပ် insoles သူတို့ကို ၁၀ မိနစ်အတွင်းနာကျင်မှုမှသက်သာစေနိုင်သည်။
ဤလိမ္မာပါးနပ်သောထိုးထွင်းမှုများသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတုန်ခါမှုဆက်တင်ခြောက်ခုနှင့်ဤထည့်သွင်းမှုများသည်ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတစ် ဦး စီအတွက်အစုံယူလာပြီးသူတို့ကမင်းကိုထာဝရချစ်လိမ့်မယ်။ (အိုး၊ သူတို့လုပ်ပြီးပြီဆိုတာငါတို့သိတယ်။ )
အဖုများပြဿနာရှိလျှင်တင်းကျပ်သောဖိနပ်များကပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ bunions အတွက်ဤဖိနပ်များသည်နာကျင်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုပျော်ရွှင်စေသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၂၉.၀၀ ဒေါ်လာ
Fishers Finery Women’s 100% Cashmere Knit Shawl
လူများစွာသည်အဘွားအင်္ကျီများအကြောင်းရယ်စရာဖြစ်သောကြောင့်အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့ကို ၀ တ်ရန်နှစ်သက်ပုံရသည်။ အံ့သြစရာမလိုပါဘူး၊ သူတို့ကသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးနွေးထွေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအဖွားအတွက်ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့လက်ဆောင်နဲ့ဖက်ရှင်ကျကျကိုမင်းမြှင့်တင်နိုင်တယ်။ ဤသည် Fishers Finery စစ်စစ် cashmere စုလျားဖြစ်သည် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီးလေးနက်နွေးထွေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သူမ၏အ ၀ တ်များအပေါ်မှကြော့ရှင်းစွာသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီ၏ပခုံးထက်၌ဆွဲထားသည်။
Quora ၏အဆိုအရ cashmere သည် Merino သိုးမွှေးထက်ပိုနွေးပြီးပိုပေါ့ပါးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသုံး ၀ င်သောရှုထောင့်မှစံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဤလှပသောစုလျားသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖက်ရှင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လက်ဆေးသောအခါ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအမှန်တကယ်ပျော့ပြောင်းလာသည်။ ဤစောင်ကိုအရောင် ၇ ရောင်ဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ၊ သန့်ရှင်းသော cashmere သည်သင့်အတွက်ဘတ်ဂျက်ကျစေသောအရာဖြစ်လျှင် Pashmina ပုဝါအစားသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၁၁၁.၉၆
OLUKAI အမျိုးသမီး Ola HOU ခြေချင်းဝတ်ဖိနပ်
ဒီနှစ်မှာမင်းအဖွားရဲ့ဖိနပ်တစ်စုံကိုအဆင့်မြှင့်ဖို့မင်းရှာနေတာလား။ ဈေးပေါတဲ့အမြှုပ်ဖိနပ်လေးတွေအတွက်စိတ်မချပါနဲ့။ သူမအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ၀ တ်နိုင်သည့်ဖိနပ်တစ်ရံလက်ဆောင်၊ စက္ကူပုံးသို့အပြင်ကုန်ခြောက်သို့သွားပါ။ ဤ OLUKAI ခြေချင်းဝတ် booty ဖိနပ် တကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ၎င်းတို့သည်အပြင်ဘက်တွင်ဇိမ်ခံသားရေနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပြင်ဘက်တွင်စစ်မှန်သောသိုးမွေးအသားမွှေးများနှင့်အတူသူမ၏အအေးဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်တောင်မှအအေးလွန်ကဲခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
သူတို့မှာဖြုတ်လို့ရသလိုလျှော်လို့ရတဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ခန္ဓာဗေဒခြေဖဝါးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူမအမြဲဝတ်ရင်တောင်သူတို့ကလန်းဆန်းနေလိမ့်မယ်။ Grippy rubber outsole သည်အမှတ်အသားမရှိသောကြောင့်သူမအားသူမ၏ခြေထောက်ပေါ်လုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ခြေချင်းဝတ်မှာချစ်စရာခါးပတ်ကသူမကိုစိတ်တိုင်းကျအံကိုက်ဖြစ်အောင်ညှိပေးတယ်။ ဘွတ်ဖိနပ်ကသူမပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့မင်းထင်ရင် OLUKAI Nohea ဖိနပ်တစ်ရံ ၀ တ်ဖို့ကအိပ်မက်တစ်ခုပါ၊ အဲဒါတွေကိုငါတို့စမ်းသပ်ပြီးပြီ၊ အရောင် ၁၇ မျိုးနဲ့လာပါတယ်။
စျေးနှုန်း: ၁၉.၉၂ ဒေါ်လာ
ဤကြေးရုပ်ပုံဘောင်သည်မိသားစုဓာတ်ပုံများအတွက်သေးငယ်သောဘောင်လေးခုပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်ပုံသဏ္treeာန်ရှိသောသစ်ပင်ပုံစံ၌လာသည်။ သူတို့ကို grandkids များ၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောမျိုးဆက်လေးဆက်မှဓာတ်ပုံများဖြင့်ဖြည့်ပါ။
ဘောင်သည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးအကျယ် ၁၃ လက်မနှင့်အမြင့် ၁၂.၅ လက်မရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အဘိုးအဘွားတို့၏ဝတ်လုံအတွက်အလွန်ကောင်းသောအပိုင်းအစဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အဖွား (သို့) အဘိုးကမင်းကိုသူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ခွန်အားတွေအားလုံးပေးပြီးမင်းကိုလက်ဆောင်တွေနဲ့လုယူသလား။ ငါအငြိမ်းစားယူသွားပြီလို့ပြောထားတဲ့ဒီတီရှပ်ကိုသူတို့ကိုယူပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ့မြေးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေတယ်။
၎င်းသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းချည်သားဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တွင်ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးပုံနှိပ်သည်။ ၎င်းကိုမီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်စာသားဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဤအရာသည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏မကြာသေးမီကအငြိမ်းစားဘိုးဘွားများအားကလေးများအတွက်အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၆၀ ဒေါ်လာ
ဟေ့ Grandude! Paul McCartney မှ
ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်၏အဘိုးအဘွားများသည် Paul McCartney ၏ပရိသတ်များဖြစ်သည်။ Beatles ဒဏ္ာရီကိုယ်တိုင်ရေးသားသောဤပျော်ရွှင်စရာစာအုပ်သူတို့ကိုရယူပါ။
Grandude သည်သူ၏မှော်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌သူ၏မြေးများကိုမည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပုံကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူဖြစ်သည်။ အဘိုးအိုသည်ဤအရာကိုသူ၏မြေးများအားဖတ်နိုင်သည်၊ ငါးပျံများ၊ နှင်းထုများနှင့်အခြားအရာများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ စာအုပ်တွင်အနုပညာရှင် Kathryn Durst ၏အံ့သြဖွယ်သရုပ်ဖော်ပုံများပါ ၀ င်သည်။
စျေးနှုန်း: ၉.၃၅ ဒေါ်လာ
ဒီ နယူးယောက်တိုင်းမ် အရောင်းရဆုံးစာအုပ်သည်ကလေးများအားဘွားဘွားအားတစ်ရက်တာတာဝန်ယူရန်တာဝန်ခံစေသည်၊ နောက်ဆက်တွဲမှာချိုမြိန်ပြီးရီစရာအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖွားနှင့်မြေးများနှစ် ဦး လုံးနှစ်သက်မည့်နှစ်သက်ဖွယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
ဒီစာအုပ်ကို Jean Reagan ကရေးပြီး Lee Wildish ကသရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ အဖွားနဲ့သူမရဲ့မြေးတွေအတွက်အိပ်ရာဝင်ချိန်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။
စျေးနှုန်း: ၁၉.၉၅ ဒေါ်လာ
သူမဝိုင်ကြိုက်လား။ သူမခရီးသွားနေလား။ ဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်အဖြေကဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်ဆောင်ဘဲ။ ဤဝိုင်အိတ်များသည်လေကြောင်းခရီးစဉ်အတွင်းဝိုင်ပုလင်းများလုံခြုံစိတ်ချရစေရန်လေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ်မှူးတစ် ဦး မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပူဖောင်းထုပ်ပိုးမှုသည်ဝိုင်ပုလင်းများမကွဲစေရန်နှင့်ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန်၎င်းတို့ကိုသုံးဆူလုံပိတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအကြမ်းခံပြီးဝိုင်၊ ရှန်ပိန်နှင့်အခြားပုလင်းများသယ်ယူရန်သုံးနိုင်သည်။ ခရီးသွားများက၎င်းတို့သည်ခရီးသွားစဉ်ဝယ်ခဲ့သောရေမွှေးအတွက်ပင်၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အိတ်များသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းစိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်နှင့်လာသည်။
စျေးနှုန်း: ၈၅.၁၈ ဒေါ်လာ
ဤအပန်းဖြေကုလားထိုင်သည်သူတို့၏ဆင်ဝင်၊ အပြင်၌ထိုင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဆွဲငင်အားသုညခံစားချက်ကိုရရှိရန် bungee suspension system ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်လျောင်းသောအနေအထားတွင်မဆိုသော့ခတ်နိုင်သည်။ အဘိုးအဘွားနှင့်အဘိုးအိုတို့သည်ထိုင်ခုံများကိုမိမိစိတ်ကြိုက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ထိုင်ခုံများကိုချုပ်နိုင်သည်။
textaline ထည်သည်တာရှည်ခံသည်၊ အပြင်၌သုံးရန်အလွန်ကောင်းပြီးခိုင်ခံ့သောသံမဏိဖရိန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပေါင် ၃၀၀ အထိထောက်ပံ့နိုင်သော်လည်းအကျယ် ၆.၃ လက်မသာခေါက်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစခန်းချခြင်းသို့မဟုတ်အားကစားပွဲများသို့ခေါ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထိုင်ခုံကိုအရောင်မျိုးစုံနှင့် လာ၍ အထုပ်နှစ်ခုအဖြစ် ၀ ယ်နိုင်သည်၊ ဒါကြောင့်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီမှာရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ၂၃.၅၀ ဒေါ်လာ
ခြောက်သွေ့သော Brushing Body Brush Set
Body brush များသည်အရေပြားကို exfoliate လုပ်ခြင်းနှင့် cell turnover ကိုမြန်စေပြီးဆောင်းရာသီ၏နက်နဲသောနေရာတွင် cellulite မပါဘဲတောက်ပသောအသားအရေကိုပေါ်လွင်စေသည်။ ဒီစုတ်တံ အရည်အသွေးမြင့်သဘာဝဝါးနှင့်သဘာဝဝက်ထီးအမွေးအမှင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် cellulite ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ချောမွေ့ပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသားအရေအတွက် lymphatic စီးဆင်းမှုကိုကူညီနိုင်သည်။
ဤ brush set တွင်လေခြောက်သွေ့ရန်လွယ်ကူသောသဘာဝချည်သားကြိုးများပါ ၀ င်ပြီး ergonomic လက်ကိုင်များသည်၎င်းတို့အားအသုံးပြုရလွယ်ကူစေသောအပြင်ဆွဲဆန့်နိုင်သောနေရာများသို့ရောက်ရှိစေသည်။ ဒီ set ကိုခြေဖဝါး၊ ဒေါက်များနှင့်တံတောင်ဆစ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော pumice stone နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ကစုတ်တံကိုအခြောက်ခံဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးခန်းမှာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဘွားတွေအတွက်ဒီလက်ဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့အသားကိုနုပျိုလန်းဆန်းပြီးတောက်ပနေစေမှာပါ။
သူတို့ကသူတို့ကိုစိုစွတ်မှုကိုသုံးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရင်၊ သူတို့ကဆိတ်နို့ခြောက်ဆပ်ပြာ (သို့) သံလွင်ဆီဆပ်ပြာကဲ့သို့အလွန်နူးညံ့သောသန့်စင်သောပစ္စည်းကိုသုံးဖို့ကျွန်ုပ်တို့သေချာအကြံပြုချင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း: $ 22.99
Ghiradelli ချောကလက်အားလပ်ရက်လက်ဆောင် Set
ချောကလက်ချစ်သူများအားလုံးကိုခေါ်ပါ။ Ghiradelli မှဤအားလပ်ရက်လက်ဆောင်အစုံနှင့်အတူခွက်၌လက်ဆောင်ပေးပါ။ ၎င်းတွင်ရွှေကြယ်များနှင့်ဒီဇိုင်းများပါ ၀ င်သောအဖြူရောင်လှပသောအားလပ်ရက်မတ်ခွက်၊ marshmallows နှင့်ချောကလက်ပူနှစ်ဆနှင့် peppermint သကြားလုံးကြံတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကြွေခွက်သည် ၁၆ အောင်စရရှိပြီးမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၁.၉၈ ဒေါ်လာ
ဒါကမင်းရဲ့သာမန် body scrub မဟုတ်ဘူး။ မရှိမဖြစ် lychee အဆီဖြင့်သန့်စင်သောဟိမဝန္တာပင်လယ်ဆားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အရေပြားကိုအာဟာရဓာတ်များဖြည့်ပေးပြီးအစိုဓာတ်ကိုတိုးစေသည်။ သဘာဝ scrub တွင်ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ကြေးနီနှင့်သံဓာတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ Lychee ဆီတွင် antioxidants နှင့် Vitamin C တို့ကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သည်။
scrub ကိုပုံမှန်သုံးပေးခြင်းသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုအားကောင်းစေပြီးဆဲလ်များကိုအားဖြည့်ပေးသောကြောင့်သင့်အရေပြားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမက၎င်းသည်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလာသည်။ Lychee ဆီသည်သုံးစွဲသူများနှစ်သက်သောရနံ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏စာရင်းထဲရှိမည်သည့်အမျိုးသမီးအတွက်မဆိုကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်တစ်ခု (အချို့သောဝေဖန်သုံးသပ်သူများလည်းနှစ်သက်သည်) ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစားလေးမျိုးပါ ၀ င်သောဤပျော်ရွှင်စရာကိရိယာဖြင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပါ။ ကောင်တာပေါ်တွင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင် cilantor, chive, parsley နှင့် basil တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
အစုံပါ ၀ င်သောအပင်များသည်အိမ်တွင်အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအော်ဂဲနစ်အစေ့ထုပ်များ၊ ရေလောင်းသည့်အခါချဲ့ထွင်သောမြေဆီလွှာများ၊ ချစ်စရာဝါးပင်အမှတ်အသားများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကြိတ်စက်နှင့်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်များပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည်ဥယျာဉ်မှူးများ၊ စားဖိုမှူးများ၊ အိမ်မှချက်ပြုတ်သူများသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အရသာကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးပြီးကုန်စုံဆိုင်သို့ခရီးသွားရန်နှစ်သက်သူမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပင်များသည်အလွယ်တကူကြီးထွားနိုင်သဖြင့်သူမကြီးထွားရန်သေချာစေရန်ဥယျာဉ်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဆောင်ပေးသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၄.၉၇ ဒေါ်လာ
ဤမယုံနိုင်စရာ Aloe + Manuka ပျားရည်နှင့် body lotion တို့ဖြင့်နူးညံ့သောအသားအရည်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။ ၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းသောဆောင်းရာသီရာသီဥတုမှအသားအရေကိုသက်သာစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်သည်။
ခရင်မ်သည်အော်ဂဲနစ်၊ ဓာတ်မတည့်သောအရာဖြစ်ပြီး parabens၊ အမွှေးနံ့သာနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါ။ Sensitive skin ရှိတဲ့သူအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ Lotion သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီးငွေပြန်အမ်းရန်အာမခံချက်လည်းပါ ၀ င်သည်။
စျေးနှုန်း: $ 15.99
Cozy Wool Socks များ
ဤဇိမ်ခံသိုးမွှေးခြေအိတ်များသည်သူတို့အတွက်စတိုင်ကျသည်။ ၎င်းတို့သည်လှပသောပုံစံများနှင့်အရောင်များဖြင့် လာ၍ အေးမြသောနေရာတွင်သင်၏စာရင်းရှိမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်နွေးထွေးသည်။
၎င်းတို့ကိုသိုးမွေး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း polyester နှင့် ၅ ရာခိုင်နှုန်း spandex တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သက်တောင့်သက်သာမရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့်တောင်တက်သမားများ (သို့) ကျောင်းသို့လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်အလွှာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
novena မှ st agatha
Bonsai Garden Seed Starter Ki
ဤ Bonsai အစေ့အစပြုကိရိယာအစုံဖြင့်သူတို့၏ကောင်တာပေါ်ရှိချစ်စရာကောင်းသောသစ်ပင်ဥယျာဉ်တစ်ခုပေးပါ။ ၎င်းတွင်အပင်အမှတ်အသားလေးခု၊ အစေ့အထုပ်လေးထုပ်၊ ချုံ့ထားသောမြေဆီလွှာရောစပ်မှုလေးခု၊ biodegradabel အိုးလေးလုံးနှင့်အပင်တစ်ပင်တွင်ပျိုးရန်သင်လိုအပ်သမျှလမ်းညွှန်ချက်ပါရှိသည်။
သစ်ပင်များသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအော်ဂဲနစ်နှင့်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီများမှရရှိသောကြောင့်အပင်ပေါက်နှုန်းမြင့်သည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေအတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး ပင်လျှင်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။ ဆောင်းရာသီတွင်အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်အထူးကောင်းမွန်သောအစိမ်းရောင်အနည်းငယ်ကို ၀ ယ်လိုသူတိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၇၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Built In Speakers နှင့်အတူ Bluetooth Turntable
မင်းအဘိုးအဘွားတွေကဗီနိုင်းပေါ်မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့တေးဂီတသံတစ်ချို့ကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တာကိုမင်းတွေ့ရှိခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ရှိပြီးသားစတီရီယိုစနစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတွေကိုတီးဖို့တေးဂီတတစ်ချောင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအံ့သြသွားစေနိုင်တယ်။ ဤ Bluetooth turntable ၃၃ ၁/၃၊ ၄၅၊ ၇၈ RPM မှတ်တမ်းများကိုသူတို့သိမ်းဆည်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့အားလွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုများပေးနိုင်သည်။
ဒီ turntable တွင်အသံအတိုးအကျယ်ကိုပေးနိုင်သော5watt stereo speaker နှစ်လုံးပါ ၀ င်သည်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရှိပြီးသား stereo system နဲ့ပိုကြီးတဲ့စပီကာများနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်နိုင်အောင်သူတို့ RCA outputs များပါ ၀ င်သည်။ မင်းကမင်းရဲ့မြေးတွေကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့စိတ် ၀ င်စားတဲ့အတွက်မင်းပါဝင်ချင်မှထည့်နိုင်တယ် Ultimate Sinatra အယ်လ်ဘမ်နှစ်အုပ်။ သူတို့ကဘယ်မျိုးဆက်လဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ လူတိုင်းက Sinatra ကိုချစ်ကြတယ်။
စျေးနှုန်း: ၅၉.၄၉ ဒေါ်လာ
BedShelfie မူရင်း Bedside Shelf
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကသူတို့ရဲ့ဆေးပြားတွေကိုသူတို့ရဲ့အိပ်ယာဘေးမှာထားချင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့စာအုပ်တွေစုဖို့နေရာ၊ တီဗီအဝေးထိန်းနဲ့ညအိပ်ရာဝင်ရေတစ်ခွက်ပဲလိုတာဘဲဖြစ်ဖြစ်။ BedShelfie အိပ်ရာထဲတွင်အပန်းဖြေခြင်းကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသောကြောက်စရာကောင်းသောလက်ဆောင်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအသုံး ၀ င်တဲ့ကုတင်ဘေးစားပွဲကသူတို့ရဲ့အိပ်ယာဘောင်ကိုညာဘက်ချိတ်တယ်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့က nightstand တွေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်အိပ်ခန်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့အကြီးတန်းဧည့်ခန်းမှာနေတယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်။
ဤအသုံးဝင်သောစင်သည်ခိုင်ခံ့ပြီး ၁၅ ပေါင်အလေးချိန်ထိခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် touch point များအားလုံး၌ခံစားမှုဖုံးလွှမ်းသောကြောင့်သူတို့၏အိပ်ယာဘောင်ကိုမဖျက်ဆီးပါ။ အနိမ့်ဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုများသည်၎င်းတို့၏ရှိပြီးသားပရိဘောဂများနှင့်လိုက်ဖက်စေသည်။
စျေးနှုန်း: ၂၄.၉၅ ဒေါ်လာ
အဘိုး (သို့မဟုတ်သင်၏အသက်တာ၌ဆေးပြင်းလိပ်သောက်သူမည်သည့်အမျိုးသမီးဖြစ်စေ) ဤ corkcicle ဆေးပြင်းလိပ်ဖန်ခွက်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင့်ဆေးပြင်းလိပ်ကို ergonomically ကိုင်ဆောင်ထားပြီးချော်လဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
အရည်အသွေးမြင့်တာရှည်ခံဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော built-in cigar rest နှင့်အတူခေတ်ဟောင်းဝီစကီဖန်ခွက်ပါ ၀ င်သည်။ အခုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာလက်နှစ်ဖက်သုံးစရာမလိုဘဲတုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာမလိုဘဲသူတို့ရဲ့ဆေးပြင်းလိပ်ကိုသောက်ပြီးဝီစကီသောက်ရင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ရဲ့ Cactus ခေါင်းအုံးအဖုံးကိုပေးပါ
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကအရီဇိုးနားမှာဒါမှမဟုတ် cacti အတွက်လူသိများတဲ့တစ်နေရာလား။ သူတို့ကိုရယ်စရာခေါင်းအုံးအကြီးလေးရဲ့အဖုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုဖက်ပါဆိုတဲ့စာသားပေးပါ။
ခေါင်းအုံးသည် ၁၈x၁၈ လက်မရှိပြီးသဲကန္တာရအပူအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသည့်အကြမ်းခံသောအကြမ်းထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနူးညံ့သောခေါင်းအုံးဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည့်တစ်ဖက်သတ်ဇစ်အဖုံးပါရှိသည်။ ကမ်းခြေမှာနေတဲ့အဘိုးအဘွားတွေအတွက် I Vitamin Vitamin Sea – ဟုပြောသောအပြာရောင်ကဲ့သို့အခြားဒီဇိုင်းများလည်းရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၃၃ ဒေါ်လာ
Sheet Pan: လက်ကမ်းအစားအစာများအတွက်အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများ
ဤစိတ်ကူးယဉ်ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအရသာရှိသောအစားအစာများကိုနှစ်သက်သောမည်သူမဆိုအတွက်ကြီးစွာသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် (ချက်ပြုတ်ရန်အချိန်မရှိပါ မီးဖိုချောင်၌ကုန်ဆုံးပြီးအစားအစာရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဂရုစိုက်ရန်ရှာဖွေနေသည်။
၎င်းသည်အရသာရှိသော၊ အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုစုစည်းထားပြီးစာရွက်တစ်ခုပေါ်တွင်ဒယ်အိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် kebabs များနှင့် Moroccan spiced lamb ကဲ့သို့ဟင်းလျာများမှစမုန်ညင်းနှင့်စပျစ်သီးတို့ဖြင့်နယ်ထားသောကြက်ပေါင်များ၊ သို့ကညွတ် frites များနှင့်ကြက်သွန်ဖြူ parmesan ပုစွန်များ၊ miso-glazed Mahi Mahi တို့ဖြင့်သကြားအစေ့အဆန်များဖြင့်မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လုပ်ရတာရိုးရှင်းပါတယ်။
သူတို့လည်းခံစားနိုင်တယ် America's Test Kitchen မှကျွမ်းကျင်သူများထံမှသင်ပြုလုပ်လိုသောအရာအားလုံးအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းပေါင်း ၆၅၀ ကိုချက်ပြုတ်နည်း ၆၅၀ ချက်ပြုတ်နည်း မရ။
စျေးနှုန်း: ၁၆.၇၈ ဒေါ်လာ
ဤလှပသောလေသံနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။ အညိုရောင်ကြေးနီပြွန်များသည်လေနှင့်ထိသောအခါလှပသောသဟဇာတဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်သာယာသောဆင်ဝင်ရှိသောသူအတွက်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
သေးငယ်သောလေတိုက်ခတ်သံကို ၅- မှတ် pentatonic စကေးသို့ချိန်ညှိထားပြီးသက်တောင့်သက်သာတွဲလောင်းရန် bubinga-finish သစ်သားထိပ်နှင့်ကျစ်ထားသောနိုင်လွန်ကြိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။ စကေး၌မှတ်စုများသည်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုအမြဲသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမလိုဘဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအသံကိုပေးသည်။
ခလုတ်သည်အပေါ်မှအောက်သို့ ၁၇ လက်မ၊ အရှည်ဆုံးပြွန်သည် ၈ လက်မရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၁၁၆.၈၉
Magaschoni အမျိုးသမီးပိုးသားလက်ရှည် V-Neck Pullover ဆွယ်တာအင်္ကျီ
ဤ cashmere နှင့်ပိုးပါသောဆွယ်တာအင်္ကျီသည်တစ်ချိန်တည်းဇိမ်ကျကျနှင့်ကြော့ရှင်းသည်။ ၎င်းတွင်ပုခုံးပိုးလက်စွပ်များပါ ၀ င်သော cashmere ကိုယ်ထည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အဖွားအပါအ ၀ င်သင်၏စာရင်းထဲရှိမည်သည့်အမျိုးသမီးအတွက်မဆိုဇိမ်ခံလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၀ တ်စုံစကတ်မှ leggings အထိအရာအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၎င်းကိုအနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ သို့မဟုတ်ခရင်မ်တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီးခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသည်။
အဘိုးအိုသည်အီတလီ၌ပြုလုပ်သောဤဖက်ရှင် fedora တွင်စတိုင်ကျသည်ကိုကူညီပါ။ ၎င်းကိုသိုးမွှေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ နွေးထွေးသော်လည်းပေါ့ပါးသည်။
အီတလီလူမျိုးများသည်သူတို့၏ပုံစံကိုသိသောအခါဤ ဦး ထုပ်သည်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်ကြော့ရှင်းသောပုံစံရှိပြီး unisex အရောင်ကိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းကအားလုံးနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ဦး ထုပ်၊ မြို့ပေါ်တွင်တစ်ည၊ သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီကိုဖြတ်ကျော်ရန်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၂၆၈.၂၉ ဒေါ်လာ
Aarke Carbonator ဖြစ်သည်
အဖွားနဲ့အဘိုးကတောက်ပတဲ့ရေအများကြီးသောက်နေသလား။ ဤ sparkling water maker နှင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်၍ စတိုးဆိုင်တွင်ငွေနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာအောင်ကူညီပါ။
၎င်းတွင်ကာဗွန်စုပ်စနစ်နှင့်ရေပုလင်းတို့ပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်တောက်ပသောရေကို (ပလတ်စတစ်ပုလင်းများစွာမသုံးဘဲ) သွားရင်းလာရင်းသောက်နိုင်သည်။ ပုလင်းသည်အဆိပ်မပါ။ အရည်အသွေးမြင့် PET ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကာဗွန်စုပ်စက်သည်လျှပ်စစ်မီးမသုံးပါ၊ ဘက်ထရီမလိုပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအရအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သောကာဗွန်နိတ်ပမာဏများစွာလိုအပ်ပြီး၎င်းကိုအဓိကလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် Amazon တွင်ရောင်းချသည်။
စျေးနှုန်း: ၂၄.၃၁ ဒေါ်လာ
Blue Light Filtering Square ဖတ်မျက်မှန်
ဤစာဖတ်သူများသည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းဖြင့် Oprah ၏အကြိုက်ဆုံးစာရင်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်စိမှုန်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးပြီးဖုန်းများနှင့်အခြားစက်များမှထုတ်လွှတ်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်ရှားပေးသောအပြာရောင်မှန်ဘီလူးများရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်များမှအလင်းရောင်ကိုလျှော့ချရန်ဆန့်ကျင်သောရောင်ပြန်လွှာ ၇ လွှာရှိသည်။
၎င်းတို့တွင်လိပ်၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ပန်းရောင် (သို့) taupe တို့ပါ ၀ င်သောချစ်စရာပလပ်စတစ်ဖရိမ်တစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းတွင်ဆန့်ကျင်ဖက်အကာအကွယ်နှစ်ခုနှင့်နွေ ဦး ပတ္တာများရှိသည်။ ဆေးစာများကို 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, or 3x တို့တွင်အဆင်သင့်ပါလာသည်။
အားလပ်ရက်များအတွက်မကြာခဏဧည့်ခံလျှင်၊ သင်၏စာရင်းထဲရှိအဖိုးအဖွားများကိုလက်ဆောင်ပေးပါ ဤလှပသော polyester နှင့်ပိတ်ချောလက်သုတ်ပုဝါများ မရ။ ecru လက်သုတ်ပဝါတစ်ထည်စီကိုကျေးဇူးတင်စကားစာလုံးနှင့်ချယ်လှယ်ထားပြီးအားလပ်ရက်ရာသီနှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကောင်းမွန်သောသတိပေးချက် အကောင်းဆုံးမှာ၎င်းတို့သည်လျှော်တိုင်းနူးညံ့သည်။ တစ်ခုစီတွင်လက်သုတ်ပုဝါလေးခုပါလာသည်။ သူတို့ကိုပိုထူးခြားလာစေရန်ချစ်စရာချည် (သို့) raffia ဖဲကြိုးဖြင့်ချည်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လေးစုသာဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အဘိုးအဘွားကြီးများစုဝေးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ ၁၂ ဦး အတွက်အနည်းဆုံးသုံးစုံ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အကြံပြုသည်။
စျေးနှုန်း: ၄၈.၀၀ ဒေါ်လာ
ဒါကမင်းရဲ့သာမန်ဆပ်ပြာမဟုတ်ဘူး။ Beekman ဆိတ်ဆပ်ပြာကို New York ရှိသမိုင်းဝင်လယ်ယာမှုတ်သွင်းပြီးသုံးကြိမ်ကြိတ်ထားသောဆပ်ပြာတုံးများဖြင့်အိမ်မှအသားအရည်ကိုပြုစုသည်။ ဘားတစ်ခုစီကိုဆိတ်နို့နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်အလွန်ဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝပြီးအရေပြားအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
ဆိတ်နို့နှင့်လူ့အသားသည် pH မျှတမှုရှိသည်၊ ဆိတ်နို့ဆပ်ပြာသည်ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးနူးညံ့စေသည်။ ၎င်းသည်အသားအရေကိုအေးစေပြီးခြောက်သွေ့သောဆောင်းရာသီတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဆပ်ပြာများကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်ယူမှုနှင့်သဘာဝရုက္ခဗေဒနှင့်ထုတ်ယူမှုအားလုံးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၎င်းတို့အားလုံးကိုအမေရိကန်တွင်ပြုလုပ်ပြီးလယ်ယာလတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးမှုနှင့်လေးစုံပါ ၀ င်သည်။ အစုံကိုပေးပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကို ခွဲ၍ ကွဲပြားသောလူများအတွက်မတူညီသောလက်ဆောင်များကို topper အဖြစ်ထည့်ပါ။ လူတိုင်းဒီဆပ်ပြာကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။
စျေးနှုန်း: ၁၂၉.၉၉ ဒေါ်လာ
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကစာဖတ်တာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဘဲ။ Kindle Paperwhite သည်အလင်းရောင်ရှိပြီးစက္ကူအစစ်ကဲ့သို့ဖတ်နိုင်သော 300 ppi glare-free display ပါ ၀ င်သောကြောင့်သူတို့၏မျက်လုံးများကိုမထိခိုက်စေဘဲမျက်မှန်တပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူ့မှာတောက်ပတဲ့နေရောင်ခြည်မှာတောင်တောက်ပမှုမရှိဘူး။
Kindle ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသည်ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့်ရေကူးကန်၌မြေးများရေပက်သည်ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲသူတို့၏နောက်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်တွင်ဖတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို 8 GB နှင့် 32 GB သိုလှောင်မှုနှစ်မျိုးလုံးနှင့်ရရှိနိုင်ပြီးစာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အသံစာအုပ်များကိုဆံ့နိုင်သည်။ သူတို့ကအဲဒါကို Audible နဲ့တောင်ချိတ်နိုင်တယ်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းသည်အခြားကြီးမားသောလက်ဆောင်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားခြင်း (သို့) အိပ်ရာထဲတွင်စာအုပ်များနားထောင်ပါ။
Kindle နှင့်အတူသူတို့သည်ဂန္ထဝင်စာအုပ်များ၊ အသစ်ထွက်စာအုပ်များနှင့်စာအုပ်သန်းပေါင်းများစွာကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်၊ အများစုသည်ဒေါ်လာ ၂.၉၉ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
ဤ taco ကိုင်ဆောင်သူသည် grandkids များကိုမကြာခဏလက်ခံကျင်းပသောအဘိုးအဘွားများအတွက်ပျော်ရွှင်စရာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ မိဘများ၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏အစားအစာနှင့်အနည်းငယ်ပျော်စရာကြိုက်သောမည်သူမဆို။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအစားအစာလုံခြုံစိတ်ချရသော ABS plastic triceratops များသည် tacos နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ညစာစားပွဲ (သို့) မွေးနေ့ပါတီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုပြုလုပ်သည်။ ဧည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင် taco ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိစေရန်၎င်းတို့ကိုတစ်စုစီရယူပါ။ T-Rex ဗားရှင်းနှင့် salsa နှင့် guacamole အတွက်ပန်းကန်လုံးပါလာသော Nachosaurus တစ်ခုလည်းရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၂.၉၅ ဒေါ်လာ
ပန်းတိုင်အသစ်တွေကိုစိတ်ထဲထားပြီးနှစ်သစ်ကိုစဖို့မင်းဟာဘယ်တော့မှမဟောင်းဘူး။ ဒီစာအုပ်ကဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုလူတွေကိုသတ္တိရှိရှိတွေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘ ၀ တွေကိုအပြည့်အ ၀ နေထိုင်နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့အားပေးပါတယ်။ သင်၏စာရင်းထဲမှစွန့်စားရှာဖွေသူအတွက်ရော၊ သူတို့နှစ်သိမ့်ဇုန်မှအနည်းငယ်တွန်းထုတ်လိုသူသည်၎င်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
အကူအညီတောင်းခံခြင်းမှအသံကျယ်ကျယ်သီချင်းဆိုခြင်း၊ မိုးကောင်းကင်ရေငုပ်ခြင်းမှအပြေးပြိုင်ပွဲအထိဒိုင်ယာရီသည်ကြောက်စရာအပြုအမူမျိုးစုံကိုအားပေးကူညီသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကနေကြီးမားတဲ့သူတို့ရဲ့ရဲရင့်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုချရေးနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မည်သူ့ကိုမျှနောင်လာမည့်နှစ်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့စေရမည့်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကရှေးဆန်တဲ့စတိုင်လ်ကိုတူးရင်သူတို့ကစိတ်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ် ဤ retro မီးဖိုချောင်နံရံကပ်နာရီ မရ။ ဤအေးမြသောမီးဖိုချောင်နာရီ၌သာမိုမီတာနှင့်လက်စွဲ timer ပါ ၀ င်သောကြောင့်အပ်ချုပ်ခန်း (သို့) အလုပ်ရုံ၌လည်းကြည့်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမား။ ဖတ်ရလွယ်ကူသောနာရီမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်ပြီးတောက်ပသော chrome accents များက၎င်းအား ၅၀'s diner ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုပေးသည်။
၎င်းသည်တိကျသောအချိန်ကိုအာမခံရန် quartz ရွေ့လျားမှုများနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် AA ဓာတ်ခဲများပေါ်တွင်သုံးပြီး၎င်းသည်၎င်းထက်ပိုပေါ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆွဲထားရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သူတို့ကရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီ retro ပုံစံကိုကြိုက်မယ်လို့ထင်ရင် ဒီရှေးဟောင်းနာရီ အေးချမ်းတယ်။ Aqua အရောင်သည်၎င်းကိုအပေါ်မှဆွဲထားခြင်းကိုကြည့်ကောင်းစေလိမ့်မည် ဤအရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သော Keurig ကော်ဖီဖျော်စက် သူတို့လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
လူတိုင်းသည် Yeti ထုတ်ကုန်များကိုနှစ်သက်ပြီး Yeti ခွက်ခွက်သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
မီးဖိုချောင်သုံးသံမဏိသံမဏိသည် DuraCoat အရောင်ကဲ့သို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံသည်။ ၎င်းသည်မကွဲ၊ အခွံမပျက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ချွေးထွက်မရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလက်စွပ်မကျန်ခဲ့ပါဘူး။
နံရံနှစ်ထပ်ပါ ၀ င်သောလျှပ်ကာပစ္စည်းသည်အချိုရည်ကိုအပူဖြစ်စေအအေးဖြစ်စေနာရီကြာအောင်ထိန်းပေးသည်။ ကော်ဖီ၊ ရေခဲရေ (သို့) ကော့တေးလ်တို့အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်။ သူတို့ကစခန်းချတဲ့နေရာမှာ၊ ကားပေါ်မှာ၊ ခရီးသွားတဲ့အခါ၊ အိမ်မှာဘဲသုံးနိုင်တယ်။ ဖန်ခွက်သည်အရောင်ကိုးမျိုးဖြင့်ရရှိပြီးငါးအောင်စရရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၄.၉၅ ဒေါ်လာ
လူတိုင်းဒိုမီနိုကစားတာကိုကြိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ညစာစားပွဲများတွင်လူများကဆွဲထုတ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ကျော့ပြန်ပြန်လာစေသည်။
ဤလှပသောလက်ဖြင့်ခြယ်ထားသောသစ်သားအစုံသည်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုပေးသည်။ သူတို့သည်အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်တို့ဖြင့်အရောင်ခြယ်ထားသောသစ်သားသေတ္တာထဲသို့လာကြသည်။ ၎င်းသည်နာရီပေါင်းများစွာကိုပျော်စရာဖြစ်စေသောရိုးရှင်းသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၈၉.၀၀ ဒေါ်လာ
အဖွားနှင့်အဘိုးကိုသူတို့၏ရောင်ပြန်ဟပ်ထားသောလုံခြုံရေးစွပ်ကျယ်နှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းများကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ 3M ရောင်ပြန်ရင်ဘတ်ခါးပတ်များကြောင့် ၃၆၀ ဒီဂရီအလင်းရောင်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်လုံခြုံပြီးမည်သည့်ရှုထောင့်မှမဆိုမြင်နိုင်သည်။
စွပ်ကျယ်သည်ပေါ့ပါးပြီးအသက်ရှူနိုင်၊ အရေးကြီးဆုံးမှာအလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင် ၅ ရောင်အကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရောင်စုံတဲ့နေရာမှာရောင်စုံပုံစံနဲ့ထားနိုင်တယ်။
ဝါးဆိုဖာ Snack စားပွဲ
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေကဆိုဖာပေါ်မှာစားတာဒါမှမဟုတ်ဖဲကစားတာကိုကြိုက်ခဲ့ရင်ဒီလောက်အဆင်ပြေတာဘာမှမရှိဘူး ဤဝါးဆိုဖာစားပွဲ မရ။ တီဗီဗန်းတစ်ခုထက်ပိုခိုင်ခံ့သောဤစားပွဲခုံသည်အစွန်း၏အောက်ခြေကိုလျှောကာအစားအစာ၊ အချိုရည်များ၊ ဂိမ်းများ (သို့) သူတို့ဆန္ဒရှိရာအတွက်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင် ၎င်းသည်အလွန်ခိုင်ခံ့သောကြောင့်၎င်းတို့သည်စာအုပ်များနှင့်ပိုလေးသောအရာများပေါ်တွင်တင်ထားခြင်းကိုယုံကြည်မှုရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုရွှေ့လိုသောအခါအလွယ်တကူလျှောထွက်ရန်လုံလောက်သည်။
ဒေါ်လာအနည်းငယ်ပို ပေး၍ ၎င်းတို့ကိုသင်ရနိုင်သည် ထိပ်စောင်းနှင့်တူသောဆိုဖာစားပွဲ စာအုပ်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုလက်နှစ်ဖက်မကုန်ဘဲပြီးပြည့်စုံသောထောင့်တွင်ကိုင်ထားရန်အလွန်ကောင်းသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၉၉ ဒေါ်လာ
The Hearthside Collection မှဤမိသားစုနံရံကပ်တွဲလောင်းသည်အဖိုးအဖွားများအတွက်ကြီးမားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်အမျိုးမျိုး၏သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး FAMILY ဟူသောစကားလုံးကိုစာလုံးပေါင်းပြသည်။ F နှင့် L တို့ကမင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူရှိတာ၊ အတူတူနေရတာကငါ့အကြိုက်ဆုံးနေရာလို့ပြောကြတယ်။
အက္ခရာတစ်ခုစီသည်ဒုက္ခရောက်နေသောသစ်သား၏အရောင်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဧည့်ခန်း၊ အိမ်အ ၀ င်လမ်းသို့ (သို့) မည်သည့်အိမ်တွင်မဆိုလှပသောတွဲလောင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ပေါင်းစည်းသည်။ ထိုအစုသည်တစ်လက်မနက်ပြီးရှစ်လက်မရှည်သည်။ ၎င်းသည်အလေးချိန်နှစ်ပေါင်ရှိသည်။
စျေးနှုန်း: ၃၅.၂၅ ဒေါ်လာ
ဤသစ်သီးလက်ဆောင်ဗန်းသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့သုံးနိုင်သောထူးခြားသောသစ်သီးခြင်းတောင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားသည်။ ဗန်းသည်သစ်တော်သီးတစ်ခြမ်းနှင့်တူပြီး၎င်းသည်အသီးများဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ အသီးများကုန်သွားသောအခါ၎င်းသည်3D သစ်တော်သီးပုံသဏ္withန်ရှိသောအသီးခြင်းတောင်းထဲသို့ခေါက်သွားသည်။
အဆိုပါဗန်းသည် ၃၁ အောင်စအထိဆံ့နိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်သရက်သီးအချပ်များနှင့် apricots ကဲ့သို့သစ်သီးခြောက်များကိုကြာရှည်ခံသောလက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဧည့်သည်များအား၎င်း၏အသုံးပြုမှုမျိုးစုံဖြင့်နှစ်သက်စေကာသူတို့၏နောက်ညစာစားပွဲတွင်ပြသရန်တစ်ခုခုပေးပါ။
မင်းရဲ့အဘိုးအဘွားတွေ၊ လုပ်ဖော်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါကလူတိုင်းချစ်မယ့်လက်ဆောင်ဘဲ။
စျေးနှုန်း: ၃၅.၅၉ ဒေါ်လာ
ရယ်စရာမိသားစု Wall Hanging
မင်းမိသားစုကနည်းနည်းရူးနေလား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ လူတိုင်းကတစ်နည်းနည်းနဲ့ရှိနေတယ်။
လူတိုင်းသိသလောက်တော့သတိရပါ၊ ငါတို့ကချစ်စရာကောင်းပြီးသာမန်မိသားစုတစ်ခုပါ၊ လူတိုင်းသိသလောက်တော့သတိရပါ။ မင်းရဲ့မိသားစုကသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကြောင့်လူသိများရင်အဖွားနဲ့အဘိုးကအဲဒါကိုကန်ထုတ်လိမ့်မယ်။
၁၆ x ၇ လက်မကြိုးဆွဲချကို rustic black and white ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်စားပွဲ (သို့) စင်ပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်နိုင်သလိုနံရံပေါ်၌လည်းချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၈.၁၈ ဒေါ်လာ
Pictioary သည်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤတစ်ခုတွင်အမှတ်အသားများနှင့်ခြောက်သွေ့ဖျက်ပျဉ်ပြားများပါ ၀ င်သည်။ စာရွက်ကြီးကြီးများသို့မဟုတ်ခုံများမလိုတော့ပါ။
သူတို့ကအနုပညာရှင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်တစ်ချောင်းလောက်သာဆွဲနိုင်လား၊ ဒီဂိမ်းကဘယ်သူမဆိုအတွက်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ၎င်းတွင်အငယ်တန်းနှင့်လူကြီးများအတွက်သဲလွန်စနှစ်ခုစီပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဗားရှင်းအသစ်တွင်လည်းသဲလွန်စများချဲ့ထားသည်။
စျေးနှုန်း: ၁၇.၄၉ ဒေါ်လာ
Scrabble ကိုလူတိုင်းနှစ်သက်သည်။ ကစားသူများသည်စကားလုံးများနှင့်အမှတ်အမြင့်ဆုံးကိုမျှော်လင့်သောဂန္ထဝင် tile game သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဝေါဟာရကိုဆယ်စုနှစ်များစွာအားပေးခဲ့သည်။
ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆပ်ပြာတွေက ဘက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နင်းပေးပါတယ်။
Scrabble ဂိမ်းတွင်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု၊ ကြွေပြား ၁၀၀၊ ကစားသမားလေး ဦး အတွက်ကြွေပြားများနှင့်ကြွေပြားများကိုဆုပ်ကိုင်ရန်အိတ်တစ်လုံးပါလာသည်။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သူမည်သူမဆိုအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ အက္ခရာတိုင်းသည်ရေတွက်သည်။
စျေးနှုန်း: $ 35.99
လက်ဖက်ရည်စက်များဖိထားသော Teas များ
သင့်စာရင်းရှိလက်ဖက်ရည်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဤဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်နမူနာသည်အနှောင့်အယှက်မရှိချောင်ရွက်လက်ဖက်ခြောက်တစ်ချပ်ပါ ၀ င်သည်။
လက်ဖက်ရည်တစ်စက်စီတွင်ဖြည့်ထားသောအရွက်လက်ဖက်၊ နံ့သာမျိုးနှင့်သကြားအစိမ်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ လက်ဆောင်ပုံးတွင်ကဖင်းဓာတ်မပါသောလက်ဖက်ရည်များဖြစ်သော earl gray, peppermint နှင့် citrus ginger တို့ပါ ၀ င်သည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပြီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြေသြဇာနှင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်ရန်လွယ်ကူသည်။
စျေးနှုန်း: ၂၇.၉၉ ဒေါ်လာ
ဆီလီကွန်ရေခဲမှိုပါသော Kollea ဝီစကီသုံးမျက်မှန်
မင်းရဲ့မိဘတွေကဝီစကီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒီကျောက် (သို့) အခြားဝိညာဉ်တွေကိုနှစ်ခြိုက်စွာ ၀ ါသနာပါတဲ့သူတိုင်းအတွက်ရော့ခ်အစိုင်အခဲလက်ဆောင်တစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ရေလောင်းခံရတဲ့အခါအဲဒါကိုမုန်းတယ်။ ဤဝီစကီမှုတ်ထားသောမျက်မှန် သူတို့ကိုနှစ်သက်သောအရက်များကိုရေခဲခွင့်ပြုပါ၊ သို့သော်ဤရေခဲသည်အစဉ်အလာရေခဲတုံးများထက်ပိုနှေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အချိုရည်သည်အရသာပိုကြာရှည်သည်။
၎င်းသည်ဝီစကီကြိုက်သူများအတွက်အေးမြသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဒီဇိုင်းဝါသနာအိုးများသည်အချိုရည်များကိုအစမှအဆုံးအထိအအေးခံရန်၎င်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်၎င်းကိုတူးဖော်သည်။ ယူနစ်တစ်ခုစီတွင်နှစ်ဆခေတ်ဟောင်းဝီစကီမျက်မှန်နှစ်လုံးနှင့်ရေခဲတုံးများကိုအေးခဲစေရန်ဆီလီကွန်မှိုများပါရှိသည်။ စုံတွဲတစ်တွဲသည်သင်၏မိဘများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်များဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၁.၈၉ ဒေါ်လာ
Michelle Obama ဖြစ်လာခြင်း
မီရှယ်အိုဘားမား၏ Becoming by the Becoming ၏တစ်နှစ်တာမျှော်လင့်ချက်အရှိဆုံးစာအုပ်များထဲတွင်ယခင်သမ္မတကတော်ဟောင်း၏ဘဝကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူမသည်ချီကာဂို၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ကြီးပြင်းလာသည်၊ ကောလိပ်သို့တက်ပြီးသူမ၏အလုပ်အကိုင်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမိခင်ဖြစ်လာသည်၊ သမ္မတကတော်ဖြစ်ရန်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည်။
၎င်းသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စတင်ရန်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Obamas ၏မည်သည့်ပရိတ်သတ်၊ သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏ခေါင်းထဲသို့ ၀ င်သွားသောအရာကိုသိလိုသူမည်သူမဆိုဤစာအုပ်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်း: ၁၁.၉၀ ဒေါ်လာ
မူရင်း Salbree Microwave Popcorn Popper
သူတို့၏ပေါက်ပေါက်ဂိမ်းကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုသို့ယူပါ ဤ BPA-free silicone popcorn popper တာရှည်ခံပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့ဟာလတ်ဆတ်ပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပေါက်ပေါက်ဖြစ်အောင်အချိန်တိုင်းပေါက်ပေါက်ဆီနဲ့စေ့တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘေးဘက်ရှိလက်ကိုင်များသည်သူတို့အားပေါက်ပေါက်ဆားနှင့်ဟင်းခတ်အရောများကိုအစေ့များထဲသို့ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကလှုပ်ရုံ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ထဲမှာအရာအားလုံးကိုဖြူးပြီးသူတို့ပေါက်ပေါက်ပြီးအောင်စောင့်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းလျှပ်စစ် popper ပေါက်ပေါက်ကဲ့သို့အရသာရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပန်းကန်ဆေးစက်လုံခြုံသည်။
သူတို့မှာမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မရှိရင် Presto PopLite Hot Air Popper ဖြစ်သည် ၂.၅ မိနစ်အတွင်းပဲပေါက်ပေါက် ၁၈ ခွက်အထိပေါက်နိုင်သောနောက်ထပ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကသူငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ဖို့လုံလောက်တယ်။ သူတို့ကိုရဖို့သေချာပါစေ အရသာရှိသောပေါက်ပေါက်စေ့အချို့ နှင့် ဟင်းခတ်ဆားများ ပျော်ရွင်မှုကိုထည့်ရန်
စျေးနှုန်း: ၂၂.၄၈ ဒေါ်လာ
Elephant Phone နှင့် Pen Holder
ဤချစ်စရာသစ်သားဆင်သည်သူတို့၏ဖုန်းနှင့်စာရေးကိရိယာတို့ကိုကိုင်ထားသည်၊ ၎င်းတို့စားပွဲ (သို့) မီးဖိုချောင်ကောင်တာအတွက်စုံလင်သည်။
၎င်းကိုသဘာဝဆန်သောအရည်အသွေးမြင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုကြည့်ကောင်းစေသည်။ ၎င်းတွင်ဖောင်တိန်နှင့်ခဲတံအတွက် slot သုံးခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည်စီးပွားရေးကတ်များ (သို့) ချက်ပြုတ်နည်းများကိုစုရန်ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ဆင်သည် ၃.၆ လက်မနှင့်အလွန်ကောင်းသောခြေစွပ်လက်စွပ်ဖြစ်သည်။
သင့်စာရင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး သည် Disney ကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ဤ Minnie Mouse မွေးဖွားခြင်းလည်ဆွဲသည်အဖိုးအဖွားမှမိန်းကလေးငယ်များအထိလူတိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ၎င်းကိုအတွင်း၌အပြာနုရောင်ဥဿဖောင်းကဲ့သို့ပုံသဏ္birthန်ရှိမီးခဲများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အနီရောင်လေးနှင့်ပြည့်စုံသော Minnie Mouse ပုံသဏ္ဌန်နှင့်တူသည်။
လည်ဆွဲသည် ၁၈ လက်မရှည်ပြီး ၂ လက်မအကျယ်ချဲ့ထားသောအပိုင်းအစရှိသည်။ ကျောက်ပုစွန်ကိုအကူအညီမပါဘဲလွယ်လွယ်ကူကူတပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ခရစ်စမတ်အတွက်အဆင်သင့်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်သေတ္တာတစ်လုံးမှာပါပါတယ်။
ဤအရာသည်သင်၏အဘိုးအဘွားများမှသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအထိမည်သူမဆိုနှစ်သက်မည့်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းအုံးတွင်အစွမ်းထက် 3D အလှည့်အနှိပ်ဘောလုံးများပါ ၀ င်သည်။ အပြင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူ၊ တနေကုန်စားပွဲမှာထိုင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ကျောနဲ့လည်ပင်းမကောင်းတာဘယ်သူမဆိုအတွက်ကောင်းပါတယ်။
နှိပ်နယ်ခြင်းများသည်အကြောများတင်းနေသော Shiatsu စတိုင်အနှိပ်ကိုပေးသည်။ ergonomic ခေါင်းအုံးသည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏လည်ပင်း၊ ကျောအောက်၊ ပုခုံးနောက်၌ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ညာဘက်အစက်များကိုသေချာစေသည်။
၎င်းသည်လက်ထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးရန်လွယ်ကူပြီးကား adapter တစ်ခုပါ ၀ င်သဖြင့်၎င်းတို့သည်၎င်းအားလပ်ရက်ရှည်ခရီးလမ်းများပေါ်တွင်ခရီးသည်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
စျေးနှုန်း: ၁၃.၀၆ ဒေါ်လာ
ပြည်နယ် ၅၀၊ အိုင်ဒီယာ ၅၀၀၀ စာအုပ်
အဖွားနဲ့အဘိုးအငြိမ်းစားလား။ National Geographic မှ 50 States 5000 Ideas: USA ပြည်နယ် ၅၀ လုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကိုသုံးဖို့သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပါ။
စာအုပ်သည်နာမည်ကျော်မှဒေသခံအထိပြည်နယ်တိုင်း၌အကောင်းဆုံးခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ပြတိုက်တွေကနေပြည်တွင်းစစ်စစ်မြေပြင်အထိသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုလားထိုင်ကနေစူးစမ်းလေ့လာတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်တွေ့ဘဝမှာနေလိမ့်မယ်။ သူတို့ကမြောက်ဘက်ကိုပို ဦး တည်ချင်ရင်ကနေဒါမှာအပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။
စျေးနှုန်း: ၂၁.၉၉ ဒေါ်လာ
Sherpa Fleece စောင်
ဤနွေးထွေးသော sherpa လည်လှီးစောင်ဖြင့်ရှည်သောဆောင်းရာသီကိုနွေးထွေးပါစေ။ တစ်ဘက်ကအမွှေး၊ အခြားတစ်ဘက်က sherpa ပါ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော texture ကိုရွေးနိုင်သည်။
စောင်သည် ၆၀ x ၈၀ လက်မ၊ ကုတင်သို့မဟုတ်အိပ်ရာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရောင် ၁၆ ရောင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အရောင်မှိန်ပြီးအစွန်းအထင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ၎င်း၏ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤစောင်သည်အလွန်နူးညံ့ပြီးနွေးထွေးသည်။ ချမ်းအေးသောရာသီဥတု၌နေထိုင်သောမည်သူမဆိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
စျေးနှုန်း: ၆.၃၉ ဒေါ်လာ
Infinity scarves များသည်ဆောင်းရာသီအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး scarves များသည်ဂန္ထဝင်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ ဒီတစ်ခုကအိမ်လုပ်ပုံလှသောဇာထိုးပန်းထိုးဒီဇိုင်းကြောင့်မင်းရဲ့သာမန်ပဝါထက်ပိုကောင်းတယ်။
၎င်းသည် ၂၆ လက်မရှည်ပြီးအကျယ် ၁၀ လက်မရှိသည်။ ကြော့ရှင်းသော်လည်းသက်တောင့်သက်သာရှိရန်စုံလင်သောအရွယ်အစား ၎င်းကိုအနီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ အဝါနုရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
သူတို့သည်နေ့လည်စာထုပ်ပိုးရန်အချိန်အများကြီးကုန်နေသလား။ သူတို့လေးတွေအတွက်ရော၊ ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုထုပ်ပိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီ Rubbermaid နေ့လည်စာသေတ္တာသေတ္တာတွေဟာသစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေနဲ့အခြားဟင်းလျာတွေခွဲထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ကွန်တိန်နာများသည်အတူတကွတွဲလျက်ရောနှောပေါင်းစပ်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အပြာရောင်ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးကိုလည်းကွန်တိန်နာများပေါ်တွင်ကပ်ကာပါဝင်ပစ္စည်းများကိုနာရီကြာအေးအောင်ထားပါ။ ကွန်တိန်နာများသည်တာရှည်ခံပြီးယိုစိမ့်မှုမရှိသောကြောင့်အလုပ်၊ ကျောင်းသို့ခရီးသွားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဤလှပသောလရောင်မီးအိမ်သည်ကြီးကျယ်။ ထူးခြားသောလက်ဆောင်ကိုပေးသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ nightstand ပေါ်မှာထားနိုင်သလိုစာအုပ်စင်ပေါ်မှာအလှဆင်အဖြစ်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တောက်ပသောအလင်းကိုပေးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညီညွတ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မဆိုအဖြူရောင်ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်အလင်းကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဘက်ထရီတစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးအားအပြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိမီးလင်းသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသစ်သားခုံတစ်ခုနှင့်ပါလာသည်။
ငါတို့သေချာအကြံပြုချင်ပါတယ် ပေါ့ပါးသော spinner ခရီးဆောင်အိတ် ရ၊ Lonely Planet လမ်းညွှန်စာအုပ်များ , အကျိုးရှိစွာ အိမ်သာသုံးအိတ် နှင့်တစ်ခု နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပိုက်ဆံအိတ်အား RFID ပိတ်ဆို့ခြင်း ဒီလိုလူတွေအတွက်
အရာအားလုံးပါသောအဘိုးအဘွားများအတွက်လက်ဆောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
အဲဒါကအမြဲတမ်းအငြင်းပွားစရာဘဲမဟုတ်လား။ မင်းကနေရောင်အောက်မှာအရာအားလုံးရှိနေပုံပေါ်နေတဲ့အဘိုးအဘွားတွေအတွက်မင်းစျေး ၀ ယ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းအပြင်ဘက်ကိုတွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပိုမို splurge အမျိုးအစားပစ္စည်းများကိုဆိုလိုနိုင်သည် limited edition အနုပညာလက်ရာ ရ၊ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားအမှတ်တရပစ္စည်းများသေတ္တာများ ဒါမှမဟုတ်အဖွားအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လက်မှုအနုပညာလက်ရာတစ်ခု
အခြားအဖိုးအဖွားလက်ဆောင်စိတ်ကူးများသည်သူတို့၏အဆစ်နာအတွက်ပူဖောင်း paraffin ဖယောင်းစက်ဖြစ်စေ၊ အနှိပ်ခံရန်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုနှစ်သက်စေသောအရာများပါဝင်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်း သူတို့သည်တီဗီကြည့်နေစဉ်သုံးနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သူမစိတ်ဝင်စားသောအရာမျိုးကိုသင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုလိုလိမ့်မည်။ သူမ၌ဝါသနာ (၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာမရှိလျှင်၊ အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများစွာမပါလျှင်) သင်အာရုံစိုက်ချင်ပေမည်။ ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန် DIY kit ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာပြုလုပ်မှု မရ။ သူမကိုယ်တိုင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလေ့လာရတာကိုနှစ်သက်နိုင်တယ် လက်သမားဒိန်ခဲ ဒါမှမဟုတ်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလား ဝိုင် မရ။
ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ၀ ယ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကချစ်ကြတယ် လှပသောညဝတ်အင်္ကျီများ ဝတ်စုံလှလှလေးများနှင့် ကျယ်ဝန်းလက်ကိုင်အိတ် မရ။ သူတို့ကအလှကုန်နဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားတာမို့ရှာကြည့်ပါ အဆင့်မြင့် skincare ဒါမှမဟုတ် bath spa တင်းများ မရ။
ဒါကကလေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေဘယ်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးဒီဂိမ်းကိုပြောင်းလဲစေမှာသေချာတယ်။ မင်းကမြေးတွေဆီကရနိုင်တဲ့လက်ဆောင်စိတ်ကူးတွေကိုမင်းရှာနေရင်ငါတို့ကြိုက်တယ် ဤထက်မြက်သောမိသားစုမွေးနေ့ပြက္ခဒိန် ၊ ဒီ ကိုယ်ပိုင်ပြက္ခဒိန် သူတို့ရဲ့မြေးတွေရဲ့နာမည်တွေ၊ မွေးနေ့တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ် သူတို့ရဲ့မြေးတွေအားလုံးရဲ့နာမည်တွေနဲ့
ထိုအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုရယူရန်စဉ်းစားလိမ့်မည် Pack & Play ခရီးဆောင်ပုခက် , ရန် ခေါက်ပြောင်းခြင်းစားပွဲ သိုလှောင်ရန်လွယ်ကူသည် ရေချိုးအုံး ဒါကြောင့်သူတို့ကကလေးကိုအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်ဆေးချနိုင်တယ်။
သူတို့ကအစုံကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ် ငါ့မြေးဆီကိုစာတွေ မရ။ ဤစာများကိုယခုရေးပြီးနောင်ကြီးလာသောအခါမြေးများကအလွန်ကြီးမြတ်လိမ့်မည်။
ဒီ Baby Handprint & Footprint Keepsake ဓာတ်ပုံဘောင် အဘိုးအဘွားအသစ်များနှစ်သက်မည့်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းကသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘ ၀ အသစ်မှာပျော်ပျော်နေချင်ချင်နေနိုင်တယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီရှပ်များ
အသက် ၅၀ ကျော်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များ
ပြက္ခဒိန်များအားလုံးကျော် Shippin '' ထွက် ...
အလှမယ် Mustang 2010
Ree's 10-Piece Bakeware Set ကိုအခုအချိန်မှာရောင်းနေပြီ
သင်သည်အိမ်တွင်အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးနိုင်သည် - ဤတွင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း
Chocolate – Peanut Butter Ice Cream Sandwiches ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ
ဝက်အူချောင်း, အာလူးနှင့် Kale ဟင်းချို
ကလေး၏ ပထမဆုံး ခရစ္စမတ် စတော့အိတ်
အရာအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးကို ဘာရနိုင်မလဲ။
955 နတ်သမီးလေး ဂဏန်းနော်။
အုပ်ထိန်းသူ နတ်သမီး နိုဗီနာ